ကျနော် မြန်မာ အလုပ်သမား (ခေတ္တ စင်ကာပူ)
ကိုယ် ကျောင်းမှာ သင်ယူခဲ့တဲ့ ဘာသာရပ် နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ မိခင်ဌာနကြီး မှာ အလုပ်ဝင် ခဲ့ရတာ သိပ်ကျေနပ် ခဲ့ပါတယ်၊ အစိုးရ ၀န်ထမ်းဘ၀ မှာတော့ ကျနော်နဲ့ ဘ၀တူ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ အထက်က အရာရှိတွေ အပါဝင် စုမိ ဆောင်းမိတယ် ရယ်လို့မရှိကြပါဘူး။ ကျနော် အလုပ်ဝင် ခဲ့တဲ့ ဌာနက လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တွေ ကိုဆိုလို တာပါ၊ တခြား ဌာန န္တရ ကောင်းတဲ့ နေရာတွေက ကျနော်တို့ နဲ့ ဘ၀မတူ အစိုးရ၀န်ထမ်း တွေကတော့ ခြွင်းချက်ပေါ့။
အဲတုံးက ရတဲ့ လခဟာတကိုယ်စာ ဒါဝတ် ဒါချွတ် ဒါစား- ခြိုးခြိုးခြံခြံ ရပ်တည် နိူင်ရုံလေးပါဘဲ။
မိုးတွင်း ရန်ကုန်ပြန် နားပြီး ကျန်တဲ့ ပွင့်လင်း ရာသီတွေ ဆို မြန်မာပြည် တနံတလျား တောတွေ တောင်တွေ ကျွန်းတွေ ဆီ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနခွဲ ဌာနစိတ် တွေအလိုက်ထွက်ကြ သွားကြပေတော့ ..
အလုပ် စ၀င်တုံးက သင်တန်းမှာ ညွှန်ကြားရေးမှုး တဦး ပြောသလို ဆူးလေလမ်းမ ပေါ် မှာ ဓါတ်သတ္တု လိုက်ရှာချင် လို့ မရဘူး ဆိုတာကိုး။
ကွင်းထဲက ပြန်လာရင် ငှက်ဖျားက အတူလိုက် လာခဲ့တာမို့သူ့ ကို ခွာချဘို့ရုံးငွေစာရင်းဌာနမှာ ခရီးစရိတ်၊နေ့ တွက်စရိတ် TA/DA တွေ ထုတ်လာသမျှ ပိုက်ဆံလေးတွေ လည်း ဆေးခန်းသွား ဆေးဘိုး နဲ့ချောရောဘဲ။ တနှစ်ပြီးတနှစ် လုံးချာပတ်ချာလိုက်ရင်း ၁၀ နှစ် ကျော် ကြာ လုပ်လာခဲ့ပြီး နောက်တော့.. အလုပ်က ထွက်လိုက် တော့တယ်။
တချိန်တည်း အတူတူ အလုပ်ဝင်ခဲ့တဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တယောက် အဲဒီတုံး ကပြောဘူး တဲ့ .. “ ပိုက်ဆံ က မလောက်ဘူးကွာ ငါ ၁၀ နာရီကျော် လောက်မှ မနက်စာ စားတယ် Brunch ပေါ့ ၂နပ်စာ အပီးဘဲ ပြီးတော့ သိပ်မ၀ါးဘူးကွ .. အစာကြေလွယ်ရင် ညနေထိ မခံဘဲ ပြန်ဆာမှာစိုးလို”့ဆိုတာမျိုး..
နောက် လူ၂ယောက် လ္ဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင် ပြီး ..ကော်ဖီမစ် တထုတ်ကို ရေနွေး၂ခွက် (တထုတ် ၂ခွက်) မှာသောက်ခဲ့ကြတာတွေ...အတော့်ကို တူသားပေသား ကျ ခဲ့တဲ့ တကယ့်ဘ၀ ခါးခါး အချိန်တွေ ဘဲ ...
အဲဒီအချိန်မှာ ရှိုးဂျော့ တွေ ခေတ်စားနေပြီ သွားရည်ကျစရာပြန်ကြားရတဲ့ ဂျပန် မှာသွားလုပ်နေ ကြ သူတွေရဲ့ဝင်ငွေ တွေ ......အိုး .. အဲလောက် ရလို့ ကတော့ "အိုက်တိုး" မကလို့အိုဇုံးလွှာ အပေါက်ကြီး တက်ဖာခိုင်းတောင် လှေကားရှည်ရှည်သာပေး လို့ ပြောမှာဘဲ. ။
အိုကေ .. ဂျပန်သွားဘို့ လုပ်တော့မည် စစဦးဆုံး အ အိ အု အဲ အော့ နဲ့ ဖွင့်လိုက်သည်။ ဟုတ်သော်ရှိ မဟုတ်သော်ရှိ ..
အပြီးအစီး ၃သိန်း ၊ ပါ့စ်ပို့ တော့ ကိုယ့်ဖာသာ လုပ်တဲ့၊ ပိုက်ဆံအကြောင်းမေ့ထား စဉ်းစားနေရင်ခေါင်းပူ တာဘဲရှိမယ်. နောင်ခါလာနောင်ခါဈေး .. PP ကလည်း ခက်ခက် ခဲခဲ မရှိပါ ဘူး ။ လမ်းကြောင်းအတိုင်း သွားလိုက်တာ မကြာပါဘူး ဘုတ် ကျ လာပါတယ်။
သို့ ပါသော်လည်း .. ကံအကြောင်းတရား က ကြံရောင်းကုလား လိုပါဘဲ .. PP လျှောက်တဲ့ Appointment Letter တွေမှာ သက်ဆိုင်ရာ နိူင်ငံ ရဲ့ မြန်မာသံရုံး Endorsement ပါရမယ်ဆိုပြီး စာတွေ ထွက်လာရော .. ဘုတ်ကျထားပြီးသား တွေလည်း သွားမထုတ်ရဲတော့ဘဲ.. အဲဒီမှာ ရွာ စ လည်တော့ တာပါဘဲ။
Appointment Letter အတွက် အမေရိကန်ဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံး တံဆိပ်တုံး ပါတာနဲ့ ဆို ပါ့စ်ပို့မှာ Good for travel to ဆိုပြီး ဂျပန် ၀င်လို့ ရတာမို့ ...အဖွဲ့ အစည်းကြီးတခု က လူကြီးတယောက်ဆီမှာ အမေရိကန် Appointment Letter ကို ၈သောင်း နဲ့ အပ် လိုက်ပါတယ်။ ရှစ်လ ကျော် ကြာသွားတဲ့ အထိ အဲဒါကြီး ရောက်မလာပါ။ နောက်ဆုံးတော့ ပါ့စ်ပို့ လျှောက်ဖို့..Appointment Letter မှာ သံရုံး Endorsement မလိုတော့ဘူး ဆိုပြီးထပ်ထွက်လာတော့မှ ..အဲဒီ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး ကို ထပ် သွားတွေ့ ရပါတယ် .. ချက်ချင်းဘဲ ပိုက်ဆံပြန် အမ်းပေးပါတယ် ( ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး ကျမ္မာပါစေ)။
အချိန်တွေတော့ ကုန်သွားတာပေါ့ ဘာတတ်နိုင်မှာလည်းလေ.... ချေးထားသမျှ လက်ကျံလေးက ထန်းလျက်လုံး ခွေးလျှက် လုံးပါးပါး လာ.. ဂျပန်လည်း မမှီတော့ဘူး ဆိုတော့ ............ အရင် ပို့ စ်တွေမှာ ရေးခဲ့ပြီး သလိုပါဘဲ စင်္ကာပူ တော့ ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
အလုပ် မကြမ်းတကြမ်း လေးတခု လည်း ရခဲ့ ပါတယ် .. (ကုလားအုပ် ထိန်း)
အလုပ်ထဲမှာ အိန္ဒိယ ဘင်္ဂလား ထိုင်း လုပ်သား တွေ တွေ့ ရ ကြုံရ ပါတယ်။ သူတို့ က နေ့ စားလုပ်သားတွေ အများစု ပါ၊ ပိတ်ရက်တွေ နားရက်တွေမှာ လုပ်ခ ပိုက်ဆံမရကြပါဘူး ကံအားလျော်စွာ ကိုယ်ကတော့ လစား လေးပေါ့။ စီးပွားရေး အဆင်မပြေလို့ပိုက်ဆံလိုချင်လို့ လာကြသူ တွေချင်းမို့ကိုယ့်ဘက်က တတ်နိူင်တဲ့ ဖေးမ မှု့ မျိုး သူတို့ အပေါ်ပေးပါတယ် သူတို့ ရဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် မှု့ လည်းရတော့ လုပ်ရတာ လည်း ပိုအဆင်ပြေ တယ်.. ရောက်စဆိုရင် အတွေ့ အကြုံ အများကြီးရှိပြီးသား လုပ်သားတွေဆီက အကူညီ တွေယူရပါတယ်။ Pressure တွေ Release လုပ် ပေါက်ကွဲတဲ့အခါတွေလည်း ရှိကြတာပေါ့။ လူတွေကိုး ..
အလုပ်ထဲမှာ ဘော်ဒါတွေနဲ့ နားတုံး၊ အော် ..ဒီ ထီးရိုးက ကာနေသေးတယ်
ထိုင်းတွေ ဘင်္ဂလား ၊အိန္ဒိယ၊တရုတ် တွေ တခြားနိူင်ငံ တွေ ထွက် အလုပ်လုပ် နေကြ ချိန်မှာ ကျနော်တို့ နိူင်ငံ က အမျိုးသား အမျိုးသမီးတွေ က နီးစပ်ရာ အိမ်နီးချင်း အဲဒီနိူင်ငံ တွေကို သွား ပြီး ပိုနည်းပါးတဲ့ လုပ်ခ တွေနဲ့ တရားဝင်ရော တရားမ၀င်ပါ ၀င်လုပ်နေကြတာ စိတ်ထဲ မှာ တမျိုး ခံစားရပါတယ်(ပညာရှင်ကော်လာဖြူ များကို မဆိုလိုပါ)။
Migrant Workers တွေခြင်း တူပေမဲ့ ရတဲ့ဝင်ငွေ လုံခြုံမှု့ နေထိုင်ရတဲ့ အနေအထား အခွင့်အရေး အခွင့်အလမ်း အများကြီးဘဲ ကွာမှာဘဲ (သာမန် လုပ်သား “ အထူးသဖြင့်တောင်ကျော်”များ ကို ဆိုလိုတာပါ)။
ကိုယ်ကိုယ် တိုင်လည်း သူတို့ နဲ့ စာရင် အခြေအနေ နဲနဲ ပိုပေးလို့ကံလေး ပိုသင့်လို့ သူတို့ နဲ့ စာရင် နဲနဲလေး ပိုသက်သာတဲ့ အလုပ်နေရာ တခု ကို ရောက်နေပေမဲ့ ထွက်လာ ကတည်းက ဘာဘဲ လုပ်ရလုပ်ရ ဆိုပြီး လာခဲ့တာမို့ လာခဲ့ရာလမ်း လည်း မမေ့ပါ။ အရင်နဲ့ စာရင်တော့ လက်ထဲ မှာ လခ ထုတ်ပြီးရင် ငွေစလေး နဲနဲ နဲ့လောလောဆည်ဆည် ကြွေးကင်းနေသေးတဲ့ အချက်လေးကတော့ သာနေသလိုရှိရဲ့ ။
ခုတော့လည်း တခြားနိူင်ငံ မှာ အလုပ်သွားလုပ်နေတဲ့ အလုပ်သမားတယောက်ပေါ့ ...
ရွာပြန်ရင် လေဆိပ်မှာ တာဝန်ကျသူတွေက နိူင်ငံခြားမှာ အလုပ်လုပ် လာတဲ့သူတွေဘဲ ဆိုပြီး ငွေတွင်းထဲ ဆင်းပြီး ပြန်တက်လာ သလိုလို အထင်တကြီး နဲ့ ဘာညာ .. ... ကြုံဘူးကြမယ် ထင်ပါတယ်...
သက်ဆိုင်ရာသံရုံး မှာလည်း ဒီလိုတွေပါဘဲ .. လာထား ...
ခရီး ကတော့ ဆက်လျှောက်နေရဦး မှာဘဲ ... လမ်း မဆုံးသေးသရွေ့ ပေါ့
Posted by mks at 11:52 PM3comments: Links to this post
ပထမနှစ်ကျောင်းသား ဘ၀မှာတော့ နန်းရှေ့ဆောင် မှာနေရပါတယ်...Main ထဲနဲ့ အဆောင် ၃-၄မိုင်လောက်ရှိ မယ်ထင်တယ်။ နန်းရှေ့ဆောင် မှာ ပထမနှစ် ကျောင်းသားတွေကိုဘဲ ထား တာပါ။ ပထမနှစ် အဆောင်စ နေတုန်းက အမှတ်တရ တခုကတော့ ...အဆောင်မှုး ဦးမြ၀င်း (UTC ဗိုလ်မှုး)ကိစ္စတခု နဲ့ ရန်ကုန်သွားနေတုန်း အဆောင်ကျောင်းသားတွေ တဆောင်လုံးနီးပါးထွက်ပြီး၊ အဆောင်မှုး အိမ်ဘေးက ငါးမွေးကန်ထဲက မွေးထားတဲ့ တီလားပီးယားငါးတွေ မျှားပြီးကြော်စားကြတာပါ။ ကျောင်းသားတွေနဲ့ရောပြီး အဆောင်ရှေ့ က ဂျီခုံထောင်တဲ့ ကိုသိန်းညွန့် ပါ ၀င်ပြီး မျှားယူသွားသေးတယ်။
အဆောင်နေကျောင်းသားဘ၀ ရဲ့ " မပြောမရှိ နဲ့ဟေး" ဆိုတဲ့ အသံကို အဆောင်နေဘူးကြသူတွေ သတိရ နေကြဦးမယ် ထင်တယ်။ ကြားတဲ့သူတိုင်း နီးရာ ပြူတင်းပေါက် ကော်ရစ်ဒါ ကနေ ထွက်ကြည့်ကြတာလေ။
မိုင်၂၀ လမ်းလျှောက်ကြတော့ ..အဆောင်ကနေ မနက် ၄နာရီလောက် ဟီးနိူးရိန်းဂျားကားတွေနဲ့ Main ရှေ့ ကိုပို့ပေးပါတယ်။
M.A.S.U Main ရှေ့က စထွက် .. ရန်ကင်းတောင်ခြေအထိသွား ..
ပြန်လှည့် MASU တက္ကသိုလ်ဆေးရုံ မှာ ပန်းဝင် ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ဆေးရုံ မှာ Color Blindness စစ်တော့ .. အစ အဆုံး အတူတူ လျှောက်ခဲ့တဲ့ ရွာငံက ခင်မောင်ဝင်း ကာလာဘလိုင်း ဖြစ်နေလို့ ..နောက် စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် ကို ပြောင်းပြီးသွားတက် ရပါတယ်။ အဲတုံးက ပထမဆုံးပန်းဝင်တာ ရွှေဘိုသား သန်းနိူင် ..။ ( ကိုကျောက် ကတော့ သူငယ်ချင်းတွေ အကူအညီ နဲ့ စောင့်တဲ့ ဆရာတွေ အလစ် စက်ဘီး နဲ့ လိုက်စီး သလားမသိဘူးး))။
ပထမနှစ်တော့ ကွင်းမဆင်းရပါ။ 1st Year Geology ကို ဆရာဦးကံစော သင်ပါတယ်။ Quartz ဆိုတာကို စကြားဘူးပါပြီ။
ပထမနှစ် ဘူမိ ယူနီဗာစီတီကျောင်းသားတဦးပုံး)
အဲဒီတုန်းက မြန်မာပြည်မှာ University ၂ခုဘဲရှိတာမလား၊
﻿ ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ဆရာ ဦးမိုးစိန် ခေါင်းဆောင်တဲ့ ဒုတိယ နှစ်မန္တလေး တက္ကသိုလ် ဘူမိဗေဒ ကျောင်းသားများ Field က နွားထိုးကြီး ဘက်ဆင်းပါတယ်။ နွားထိုးကြီး Anticline နေရာ Traverse သွားတော့ ဆရာကြီး ခြေလှမ်း ကို ကျနော်တို့ အမှီ မလိုက်နိူင်ခဲ့ကြပါ ..ပြတ်ကျန်ခဲ့လို့ အဆူခံကြရပါတယ်။ ရေဘူးတွေ ကုန်ပြီး ရေအရမ်းငတ် ခဲ့တာပြန်သတိရပါတယ်။
နောက် အုပ်စု ၃စု ခွဲလိုက်ကြပြီး တရွာစီ မှာ စခန်းချကြတော့ ဆရာဦးလာဂျာ ခေါင်းဆောင်တဲ့ ကျနော်တို့ အုပ်စုက ခံစပ်ကုန်းရွာ ရောက်ပါတယ်။ ( ဆရာဦးသိုက်ထွန်းသော်အဖွဲ့(မင်းဂုံတောင်)၊ ဆရာဒေါက်တာ တင်သိန်းအဖွဲ့(ဖလံကုန်း))။ တည မှာ ဆရာဦးလာဂျာ က သူတို့ကျောင်းသားဘ၀တုံးက အကြောင်းတွေပြန်ပြောပြတယ် ..
" ငါတို့ Field ဆင်းတုံးက ဆရာဦးသာလှ က ရှေ့ကနေသွားတော့ ဒို့တွေ ကနောက်ကနေပြီး မောမောနဲ့ သာလှလူမိုက် သာလှလူမိုက် လို့ ဆရာကြီး မကြားအောင် အော်ပြီးလိုက်ကြတာကွ" ..
နောက်နေ့မနက် ကွင်းဆင်းလို့ စင်္ကြာတောင်တက် ကြတော့ မြင်းခြံသား ထွန်းစိုးက လာဂျာလူမိုက် လာဂျာလူမိုက် လို့တိုးတိုးအော်ပြီး လိုက်ပါရော ..မောမောနဲ့ ကျနော်တို့ မှာ ရီလည်းရီချင် ရီလည်း မရီရဲ .. အမှတ်တရတခုပါ.. (ကန်တော့ပါ ဆရာဦးလာဂျာ ခင်ဗျာ)။
ကျောင်းပြီးတော့ ထွန်းစိုး R.A.S.U Geology Dept. မှာ ဆရာ ၀င်လုပ်ပါတယ်၊ အင်း .. သူ ဒီအကြောင်းကို သူ့ကျောင်းသားတွေကိုတော့ ပြောပြမယ် မထင်ဘူး .. နိူ့မို့ " ထွန်းစိုးလူမိုက် ထွန်းစိုးလူမိုက်" ဆိုတာ ဆက်ရင် ဆက်နေဦး မှာလေ .. ( အမှတ်တရ ပေါ့ သူငယ်ချင်း ထွန်းစိုးရေ)။
ဒုတိယနှစ် Field ဆင်းမဲ့ မနက် Main ရှေ့
ခံစပ်ကုန်းရွာ စကြာင်္တောင် နောက်ခံ ဖြင့် ... Survey လက်တွေ့
ရှေ့ .. လှမိုး(မြိုင်) ကြည်စိန်(မြင်ကွန်း)ဇော်ဌေး(သာစည်)သိန်းဇော်(ရေစကြို)၀င်းနောင်(မိတ္ထီလာ)
နောက်.မောင်မြင့်(သာစည်)ခင်မောင်စိုး(ချောက်)စိန်လင်း(မကွေး)မြင့်ဆွေ(ရေစကြို)မော်ခမ်း(အောင်ပန်း) ရဲညွန့်ဦး(ချောက်) တိုးအောင်(သာစည်)။
တတိယနှစ်ကြတော့ ဆရာဦးဗိုလ်ဆန်း ခေါင်းဆောင်ပြီး ကျနော်တို့ နွားထိုးကြီး ဘက် ဘဲ ပြန်ဆင်းပါတယ်။
ထန်းတောမရွာ၊ အိုးပုံတောရွာ၊ မိုးတိမ်ပြင်ရွာ .. ကျနော်တို့ ကျောင်းသားအဖွဲ့ နဲ့ မိုးတိမ်ပြင်ရွာအသင်းနဲ့ ဘော့လုံး ကန်ကြတော့ .. MASU လက်ရွေးစဉ် ဟန်မော် ရဲ့ ခြေသလုံး မွေးတွေ လိမ်ကောက်နေတာကြည့်ပြီး မိုးတိမ်ပြင်ရွာသားတွေက မြို့ကလာတဲ့ကျောင်းသား ဆိုတော့ ခြေသလုံး မွေးတွေ စက်နဲ့ကောက်ထားတာ လို့ပြောကြလို့ . ဟန်မော်ရဲ့ နာမည် စက်ကောက် လို့ တွင်သွားပါတယ်။
တတိယနှစ် Field ရဲ့ အမှတ်တရ ကတော့ .. ညနေ ကွင်းဆင်းပြီး ပြန်လာကြတော့ Repeater ၂ယောက်နဲ့ ကျနော် .. ထန်းတက် နေတဲ့ ထန်းပင်အောက်သွား .. ထန်းပင်ပေါ်က ချလာစ ပင်ကျရည် ပုဇွန်ဆိပ်ခုန် ၂မြူလောက် သောက်ပြီး Camp ကိုပြန်လာ ..မူးလည်းမူး ဆရာသိမှာလည်းစိုး တော့ ထိန်းနေနေရတာပေါ့။ ညစာ ထမင်းစားပြီး ပန်းကန်ဆေးတော့( ကိုယ့်ပန်းကန် ကိုယ်ဆေးကြရပါတယ်) ပန်းကန်ဆေးပြီး ပန်းကန်ထဲက ရေကို ကိုယ့်ခေါင်းပြန်လောင်းချပြီး ဟားဟား နဲ့အော်ရီနေတော့ ထန်းရည်သောက်တာ ပေါ်သွားရော။ ဆရာ ဘာမှမပြောဘဲ မသိသလိုနေပေးခဲ့ပါတယ်။
3rd yr Field ဆင်းမဲ့မနက် Main ရှေ့ မြင်းခြံ ပြည်တော်အေးကား စောင့်နေတုံး
ဆရာဦးဗိုလ်ဆန်း ခေါင်းဆောင်တဲ့ တတိယနှစ် ကွင်းဆင်းအဖွဲ့ Field သိမ်းပြီး ကျောင်းပြန်အရောက်
နောက် .. သန်းလွင်(လွိုက်ကော်)ဖုန်းမြင့်(ချောက်)ဆရာဦးဗိုလ်ဆန်း၊ ဇင်လှိုင်(တောင်သာ)နေလင်း(Repeater)စံထွန်းဝင်း(Repeater)သိန်းဇော်(ရေစကြို)တိုးအောင်(သာစည်)ဟန်မော်(မန္တလေး)မောင်မောင်တာ(Repeater)မောင်မောင်မြင့်(သာစည်)﻿
3rd yr Field ဆင်းတုံးက ခင်ခဲ့တဲ့ ထန်းတောမရွာက ကိုလှမြင့် မန္တလေး လာလည်တုံး အမှတ်တရ
စတုတ္ထနှစ် ရောက်တော့ မေမြို့အရှေ့ဘက်က ဖာသင်း ခေါ်တဲ့ ရှမ်းရွာ လေး က မူလတန်းကျောင်းလေးမှာစခန်းချပါတယ်။ Field Leader ဆရာ က မန္တလေးဝိဇ္ဇာ နှင့်သိပ္ပံတက္ကသိုလ် ဘူမိဗေဒ ဌာနရဲ့ တဦးတည်းသောဆရာမ ဒေါ်နေသောင်းသောင်းပါ။
ကျောင်းHall ထဲမှာ ကျနော်တို့ အိပ်ကြပြီး ဆရာမ ကတော့ တွဲရက် ကျောင်းရုံးခန်းမှာအိပ်ပါတယ်။ ညဘက် တခါတလေ ပိုကာဆွဲရင်တော့ ဆရာမလည်း တအိမ်ဝင်တာပေါ့၊
အမှတ်တရ တခုက ဆရာမ ညရေးညတာ တပိုတပါးသွားဘို့(စိုင်း)မောင်မောင် က ၀ါး ကျည်တောက်တွေ ခုတ်ထားပေးပါတယ်။ Field သိမ်းပြန်ကြတော့ (စိုင်း)မောင်မောင် ယူလာတဲ့ အ၀တ်ထည့်တဲ့ သံသေတ္တာထဲ ၀ါးကျည်တောက်၂ခု သူမသိအောင် တိတ်တိတ်ထည့်ပေးလိုက်ကြတယ်၊ လက်သည် က MASU လက်ရွေးစဉ် ဂိုးသမား ပဲခူးသား မြတ်ထွန်းပါ။ဖော်လိုက်ပြီ မြတ်ထွန်းရေ..( နှစ်၃၀ကြာပြီးမှ ဖော်ကောင်ဘညွန့်ကြောင့် အမှု့တော့ပေါ်ပြီ .. စိတ်မဆိုးပါနဲ့တော့မောင်မောင်ရေ .. စကားမစပ် အဲဒီ အပေါ့အိုး အဲလေ ၀ါးကျည်တောက်တွေ အမှတ်တရသိမ်းထားသေးလား? ;p)။
Final year မှာနေခဲ့တဲ့ အောင်မင်္ဂလာအဆောင်ပုံပါ (Final Field ပုံတွေမရှိလို့)
ကျောင်းပြီးလို့ဘဓရ အလုပ်ဝင်တော့ 1st Field မြန်မာပြည်တောင်ဘက်စွန်းကရွှေကျွှန်း
ရွာကို ကတိုက်ကရိုက် ပြန်သွားရလို့ အခုမှ ရေးဖြစ်ပါတယ် မကေ။
ကြာခဲ့ပါပြီ ... ကျနော် အသက်လည်း နှစ်တွမ်တီး တတင်းပလပ်ပလပ်စ် တွေဆိုတော့ငယ်ဘ၀ကို ခဏပြန်ရောက်သွားတုံး စိတ်လည်းခဏတော့ ပြန်နူပျို သွားတယ်။ ကျနော်လည်း သူ့ကျောင်းမှာ အလှူ လုပ်ရင် ဆိုင်း မထည့်ရ ဆိုတဲ့ ဘုန်းကြီး လိုပါဘဲ .. ကျေးဇူးပါ ..( For inspiration)
Posted by mks at 2:19 PM9comments: Links to this post
အလွန် အရေးကြီး ပုဂ္ဂိုလ်
အရင် အလုပ်မှာ တုံးက ဌာနခွဲမှူး ဆရာကြီး တယောက် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့် ပြဘူးတာလေး သတိရ လို့ ပြန်ရေး လိုက်တာပါ .. ဘလော့မှာရေး တာက ကိုယ် မှတ် ချင်တာလေးတွေ မှတ်ထားတဲ့ သဘောလည်း ပါပါတယ်။
“ VIP ဆိုတာ Very Ignorant Pote-thin-nyo (ပုတ်သင်ညို) ကွ .. အပေါ်ကပြောလည်း ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ နဲ့၊ အောက်က ပြောလည်း အင်း အင်း ဆိုပြီး တဆတ်ဆတ် နဲ့ .. ဘာကိုမှလည်း မသိနားမလည်ဘူး .. အမြဲတမ်း ခေါင်းဘဲ ငြိမ့်နေတယ် "
ဟုတ် တုတ်တုတ် လို့ စိတ်ထဲမှာ မဖြစ်ဘူးလား.. လာရောက်စစ်ဆေးကြည့်ရှု့ပြီး လိုအပ်သည် များညွှန်ကြားသွား ..ဆိုတာ တွေလေ..
နောက် ... ရုံး ကဘဲ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တယောက်ပြောတာက ..
VIP ဆိုတာ V----- Interested Person ကွ ဟူ၏။
( V ဆိုတာ Virginia ဆေးရွက်ကြီး ဖြစ်မှာပေါ့။ ဆေးလိပ်၊ ဆေးတန် ကြိုက်သူတွေ ကို ရည်ရွယ်တာလားဘဲးဝ) )
ဆရာတော်ကြီးတပါး အိန္ဒိယ နိူင်ငံမှ ပြန်ရောက် လာတော့ ဆရာတော် တို့ကို V.V.I.P လို ဆက်ဆံ ကြောင်း ပြန်ပြောပြထားတာ ဖတ်ရဘူးပါတယ်၊ ..V ကို ရှေ့က ကြိုက်သလောက် ထည့်လို့ ရတယ် လို့ မှတ်လိုက်ရပါတယ်။
(ပုတ်သင်ညိုပုံ google မှယူပါသည်)
Posted by mks at 9:31 PM2comments: Links to this post
(ကိုဇော်မျိုးလွင် ဆီမှ ခွင့်တောင်းပြီး တင်လိုက်ပါတယ်)
Posted by mks at 10:36 AM5comments: Links to this post
နွေရက် မို့ ကြွေရွက်တို့ မြေသက်လို့ နေပြီ
ကျနော်တို့ မြို့ လေးမှာ
စိန်ပန်းပြာတွေ တပင်လုံးဝေနေအောင် ပွင့်ချိန်
ငယ်တုံးက၀က်သစ်ချအပွင့်တွေက ၀တ်ရည် အချိုတွေ တက်စုပ်ကြတယ်
ငါးဥသီးလို့ လည်းခေါ် ဆူးသီးလို့ လည်းခေါ် တဲ့ Yellow berry သီး တွေမှည့်ချိန်
Mulberry လို့ လည်းခေါ်တဲ့ ပိုးစာသီး ပေါ်ချိန်
(မှည့်ရင် နီညိုရောင် နဲ့ချိုတယ်)
စွယ်တော်လို့ လည်းခေါ်တဲ့ တလ ပွင့်ချိန်
(လက်ဖက်အညွှန့် လေးတွေက ဒီချိန် ဆို စိမ်းပြီး နူဖတ် နေတာပါ၊ မိုးရွာလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ ရွက်ဖါးကြီးတွေ ဖြစ်ကုန်တယ်တဲ့) ကျောင်းသားဘ၀ တုန်းက ကျောင်းပိတ်ရင် ပင်လောင်း၊နောင်တရားဘက် ဈေးနေ့တွေမှာ လက်ဖက်ခြောက် လိုက်ကောက်(၀ယ်)ခဲ့ဖူးတယ်။
﻿ လဘက်ခြောက် ရွက်သစ်ပေါ်ချိန်
ပန်းသီးအရိုင်းလို့ ပြောတဲ့ ပင်စိမ်းသီး နေစာလောင် တွေကြွေချိန်
ပင်စိမ်းသီးကို ထောင်းစား၊ ဆားရည်စိမ် ပြီး အချဉ်ပေါင်း လုပ်စားကြတယ်။
ဂနိူင်တွေထဲ မှာ ပုစဉ်းရင်ကွဲတွေ အော်ချိန်
(အတောင်တွေကိုတခု နဲ့ တခု ပွတ်တိုက်တာပါ။ တုတ်ချောင်းရှည်လေးမှာပိန္နဲအစေးတွေ သုတ်ပြီး ပုစဉ်းရင်ကွဲတွေ လိုက်တို့ ပြီးဖမ်း ကြော်စားကြတယ်)
တတောလုံး တတောင်လုံးက သစ်ပင်တွေ ရွက်နူစိမ်းလေးတွေ ထွက်ချိန်
အာရှတေးသီငှက် Migrant ဥသြ တွေရောက်လာချိန်
ဥသြဖိုတွေက အမဲရောင် ရှိပြီး၊ ဥသြအမတွေ က ပြောက်တိပြောက်ကျားတဲ့
သူတို့ ရဲ့ မျက်စိ အရောင်တွေက နီရဲတောက်နေတယ်
(မြေနန်းစံ ရွှေအီကုတ်၊ ဆူးပုတ် နဲ့ ရော၊ သိကြားမင်း မနေနိူင် ဇွန်းကိုင်လို့ ဆင်း)
မြက်မန်းဥ၊ ဆူးပုတ်နု၊ သင်းဝင်၊ မြင်းခွာအမြစ်၊ ပိန္နဲသီးနု၊ ဟင်းရွက်ရောရာ၊ ဂေါ်ရခါးညွှန့် နုနု ပေါ်ချိန်
(ဆေးဘက်ဝင်တယ်ဆိုပြီး သင်္ကြန် အကြတ်နေ့သင်းဝင်ရွက်နု၊ အတက်နေ့ ကတက် စားတဲ့ဓလေ့ ရှိပါတယ်)
သင်္ကြန်ပြီးရင် တာတက်ပွဲ (မီးလုံးပွဲ)တွေ တရွာပြီး တရွာ ကျင်းပချိန်
ရှင်ပြု အလှုတွေ လှုချိန်
နွေရက်မို့ကြွေရွက်တို့မြေသက်လို့ နေပြီ ( ဆိုင်တော့ မဆိုင်ပါဘူး သီချင်းစာသားလေးကြိုက်လို့ ပါ)
ဒီ ရာသီ ကျနော်တို့ ဆီ အလည်လာ လို့ ကောင်းတဲ့ အချိန် ပါ ..
အောင်ပန်းမြို့ မှ ကြိုဆိုပါတယ် ..
ဓါတ်ပုံများ Google မှယူပါသည် ....
Posted by mks at 8:46 AM 10 comments: Links to this post
အမှိုက် ထဲက မြွေ
ရွာတခေါက်ပြန်တုံးက မီးပျက်တာ ရေခက်တာ မြောင်းပုပ်စော်နံတာ ခြင်ကိုက်တာ ဘတ်စကားကျပ်တာတွေ ကြုံတာကတော့ မိတ်ဟောင်း ဆွေဟောင်းတွေ ပြန်တွေ့ သလိုပါဘဲ အရင်ကလည်း အမြဲ ယဉ်ပါးခဲ့ပြီးသား နေသားကျပြီးသားတွေမို့ ထူးပြီး စိတ်ထဲ မှာဘာမှမရှိပါဘူး ..
တခုရှိတာကတော့ လက်ထဲက ဘူးခွံ စက္ကူ ပလပ်စတစ်အိတ်ခွံ စတဲ့ အမှိုက် တွေ ကို ပစ်ဘို့နေရာလိုက်ရှာမိ တာဘဲ... ရောက်စမှာ ပြောတာပါ၊ နောက်တော့လည်း
When in Yangon, do as the Yangonians do ဆိုတဲ့အတိုင်း ဖြစ်သွားတာပါဘဲ.. သွားထား ... ညှစ်ထား .. ထွေးထား ..ပစ်ထား .... ကိုယ့်လက် က ကျွတ် .. ဗြွတ် ဘဲ ...
ရန်ကုန်မြို့ ဆင်ခြေဖုံး မြို့ နယ် ရပ်ကွက်တွေ ရဲ့ချိုင့်တွေ မြေနိမ့်ရာ နေရာတွေမှာ တမြို့လုံးက ထွက်တဲ့ အမှိုက်တွေ လာပစ် လာပုံကြတာ အဲဒီဘက်တွေ ရောက်ရင် တွေ့ ကြဘူးမှာပါ။ အမှိုက်တွေ ပြည့်သွားပြီးရင် အဲဒီအပေါ်ကို မြေကြီးလေးတွေ လာဖြူး ပါတယ် ခွေးတွေ ကြောင်တွေ အပေါ့အလေးသွားပြီး ခြေထောက်နဲ့ နောက်ဖက် မြေကြီး ကို ၃ ၊ ၄ချက် ယက်လိုက် သလိုမျိုးလေ။ နောက်တော့ မိုးရွာ နေပူလေတိုက် နဲ့မြေကြီးတွေလည်း မရှိတော့ပါဘူး .. ကျွတ်ကျွတ်အိတ် အစတွေ ထိုးလိုးထောင်လောင်နဲ့ ။
ရန်ကုန်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ဌာနမှုးတဦးနဲ့အင်တာဗျူး တခုမှာ “ကျနော် အမှိုက်ပစ်ဖို့ နောက်ထပ် နေရာ တွေ ထပ်တွေ့ ထားပါသေးတယ်” ဆိုပြီး ဂုဏ်ယူစွာ ပြောသွားတာ စာစောင် တခုမှာ ဖတ်လိုက်ရ တယ်... သူ့ အတွေးအခါ် ကိုယ့်အတွေးအခေါ် ပေါ့ .. အကြိုက်ချင်းသာ တူရင် ကုလားမ လင်ရမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ ဗမာစကားလိုပေါ့။
ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဘယ်လိုထိခိုက် မှာလည်း?? ဖြတ်သွားရင်၊လေသင့်ရင် ဆိုးဝါးတဲ့ အနံ့ တွေ နံမယ် မသာယာတာတွေ မြင်ရမယ် .. ပြီးတော့.. ပြီးတော့...သောက်သုံးရေကွာလတီ ၊ ရောဂါဘယ တွေ နဲ့ ကျမ္မာရေး .။
လူအများစု က သောက်သုံးရေအတွက် မြေအောက်ရေ ကို အားကိုးကြရပါ တယ်။
မြေကြီးအောက်က မြေအောက်ရေ တွေဟာ မိုးပေါ်ကလာတာပါ။ မိုးရေ ဆီးနှင်း တွေ မြေကြီးပေါ် ရောက်လာ ကျလာရင် မြေမျက်နှာပြင်ပေါ်က မြေသားအမျိုးအစားတွေ နဲ့ လိုက် ပြီး မိုးရေ ( မြန်မာပြည် အတွက်ကတော့ မိုးရေကအဓိက အကျဆုံးပါ) တွေဟာ အနည်းနဲ့ အများ မြေကြီးထဲ စိမ့်ဝင် သွားပါတယ်။ သဲဆန်မြေ ကျောက်စရစ်မြေတွေ မှာဆို ၅၀%အထိ၊ အခြားမြေတွေ ရွှံ့ စေးမြေတွေ မှာတော့ ၅% ကနေ၂၀% အထိ မြေကြီးထဲ စိမ့်ဝင်တတ်ပြီး ကျန် ရေတွေကတော့ ချောင်း မြောင်းတွေထဲ စီးသွား.. အငွေ့ ပြန်ပြီး လေထုထဲ ပြန်ရောက်သွားပါတယ်တဲ့။
မြေကြီးထဲ စိမ့်ဝင်လာတဲ့ရေတွေဟာ မြေအောက်ရေလွှာ ရောက်သည် အထိ အလွှာ အမျိုးမျိုး ဖြတ်ပြီး စိမ့်ဝင် သွားရာမှာ မြေလွှာ၊ကျောက်(အက်ရာ)အလွှာတွေဟာ ဘက်တီးရီးယား ပိုးတွေကို စစ်ထားနိူင်ပါသတဲ့၊ သို့ ပါသော်လည်း ဘက်တီးရီးယား တွေဟာ မြေအောက်ရေ အလွှာထဲ ၀င် ဘို့ လမ်းကြောင်းတခုခုတွေ့ ရင်တော့ အန္တရာယ်ကြီး မားတဲ့ ပိုး အစုအဝေးဟာ မြေအောက်ရေထဲ ရောက်ရှိနေတတ်ပါတယ်တဲ့။ အန္တရာယ် မပေးတဲ့၊ တချို့ ဆို အကျိုးပင်ရှိစေတဲ့သတ္တုဓါတ်တွေ မြေအောက်ရေထဲမှာပျော်ဝင် နေတတ်သလို၊ အန္တရာယ်ဖြစ်စေတတ်တဲ့ဓါတ်တွေ ဟာလည်း တချို့ မြင့်မားတဲ့ နှုံးနဲ့ပါဝင်နေတတ် ပါသတဲ့။
ခုန ကပြောတဲ့ အမှိုက်တွေဟာ လူနေရပ်ကွက်တွေထဲမှာ အထိန်းအချုပ်ကင်းစွာ လာပစ်ထားကြတာပါ။ အမှိုက်ဆိုကတည်းက မလိုလို့ စွန့် ပစ်တဲ့ အရာတွေပေါ့၊ အဲဒီ အထဲမှာ ဆေးရုံ ဆေးခန်းက စွန့် ပစ္စည်းတွေလည်းပါမယ် ထင်တယ်၊ (ကျနော်တို့ ဆီမှာ ဆေးရုံစွန့် ပစ္စည်းတွေ စနစ်တကျ စွန့် ပစ်တဲ့ စနစ်တွေ ကျနော် မလေ့လာဘူးသေးတာကြောင့် မှားနေရင် ထောက်ပြပေးပါ)။
မိုးရွာချလိုက်လို့ဒီအမှိုက်တွေ ဖြတ်ပြီး စီးလာတဲ့ရေတွေ မြေအောက်ရေလွှာ ထဲ ရောက်သွားရင် ရေတွေညစ်ညမ်း သွားမယ်။ မြစ် ချောင်းတွေ ညစ်ညမ်းနေတာ မျက်စိနဲ့ မြင်တွေ့ ရနိုင်ပေမဲ့ မြေအောက်ရေ ညစ်ညမ်းနေတာကိုတော့ မျက်စိ နဲ့ မမြင်နိူင်တာမို့ကျနော်တို့ တွေ မျက်ကန်း တစ္ဆေမကြောက် ဖြစ်နေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
၀မ်းလျှောတာလောက် သာမာန်ဖျားတာနာတာလောက်၊ဒင်ဂီး တိုက်ဖွိုက်လောက် မကြောက်ရင်တော့
“ဒီမှာ ခင်ဗျားတို့ ကင်ဆာတွေဖြစ်ကုန်မှာနော” လို့ ခြောက်ထည့်လိုက်မယ်ဗျာ ..
ခက်တော့ခက်သား ကျနော်တို့ ကလည်း ကြွက်ဆေး သောက်သလို ချက်ချင်း တုံးကနဲ လဲသေသွားမှကြောက်တတ်ကြတော့လည်း ....
( “နေစမ်းပါဦး ကိုဟိုဒင်းရဲ့ဒို့ က ဒီ ရေတွေ မသောက် မသုံး ရင် ဘာကို သောက်သုံးရ မှာလည်းကွာ လို့ မေးလာရင်တော့ .... ဟုတ်ကဲ့ ကျနော် အခုတော့ သွားစရာလေးရှိသေးလို့အဟဲ အဟဲ ” ပါ)။
ကိုဝင်းမောင် ပြောသလိုဘဲ .. ပေါင်မုန့် မရှိရင် ကိတ်မုန့် စားကြတာပေါ့။
Posted by mks at 3:56 PM6comments: Links to this post
တောမှာဘဲ ပျော်ပျော် နေတော့မယ်
အိမ်နီးခြင်း ရွာသားချင်း မြို့ သားချင်း ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်တွေ နဲ့အပြန်အလှန် ခင်မင်ရင်းနှီး မူ့ ၊ ယိုင်းပင်းကူညီကြ မှု့ တွေဟာ .. ရွာငယ် ရွာကြီး မြို့ ငယ် မြို့ ကြီး မြို့ တော် နေရာဒေသ တွေအလိုက် ပြောင်းပြန်အချိုး အတိုင်းကွာခြားသွားကြတာလေ...
ရန်ကုန် စရောက်တော့ ပတ်ဝန်းကျင်၊ အိမ်နီးနားခြင်း တွေရဲ့တအိမ် နှင့် တအိမ် ရင်းရင်းနှီး နှီး သိပ်မရှိကြတာ သတိထားမိတယ်..အပေါ်ထပ် အောက်ထပ် တတိုက် ထဲပေမဲ့ လည်း မြို့ ပြလူနေမှု့ ဓလေ့ပုံစံ အတိုင်း ဖာသိဖာသာဘဲ နေကြတာဘဲ..
ကျနော် တို့ မြို့ ငယ် လေးမှာတောင် ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်း လယ်ကွင်းတွေ ယာခင်းတွေ သိမ်းပြီး .. အကွက် ရိုက် အိမ်ကွက်တွေ ချပေးလိုက်တော့ ..၀င်လာတဲ့ နယ်ပေါင်းစုံ ကလူတွေနဲ့ပို စည်ပင်လာခဲ့ပြီး .. မြို့ အ တိုင်းအတာနဲ့တဦးနဲ့ တဦး ခင်မင်သိကျွမ်းမှု့ ၊ ညီညွတ် ယိုင်းပင်းကြမှု့ တွေ ဟိုးအရင်လို ပုံစံ မဟုတ်တော့ဘဲ တမျိုး ပြောင်းသွားခဲ့တယ်။ နည်းနည်းမြို့ ဆန်သွားခဲ့တာပေါ့။
မြို့ ကြီးလာလေ လူများလာလေ တဦး နဲ့ တဦး သိကျွမ်းရင်းနှီးမှု့နည်းသွားလေလေ .. သဘာဝကျတဲ့ ဖြစ်စဉ် တခုပါဘဲ။
တခါတခါ မြို့ မဆန်ဘဲ တချို့ တောဟန် သဘာဝလေးတွေက ချစ်စရာ ပိုကောင်းနေ ပြန်ရော..
အလုပ်ရှာဘို့အလုပ်လုပ် ဘို့တခုတည်းသော ရည်ရွယ်ချက် နဲ့ကျနော် ဇာတိမြို့ လေးက ထွက် လာခဲ့တာပါ... အသက်ကြီးလာရင် အလုပ်မလုပ် နိူင်တော့ရင် ..ဇာတိမြို့ လေးမှာဘဲ ပြန်နေချင်ပါတယ်၊ ပို သိုက်ဝန်း နွေးထွေးတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့ခံစားရလို့ ပါ။ မြို့ အတိုင်းအတာ နဲ့ မဟုတ်ရင်တောင် ရပ်ကွက် အတိုင်းအတာနဲ့အဲဒီ နွေးထွေးမှု့ တွေ ဟိုမှာ ကျန်ပါသေးတယ်...ကိုယ့်ဘက်ကလည်း အလားတူ ခံစားမှု့ မျိုး ပတ်ဝန်းကျင် ကို ပေးနိူင်ရမှာပေါ့ ...
သတင်းစာအဟောင်းတစောင် မှာ ဖတ်လိုက်ရတဲ့ AGEING ALONE ဆိုတဲ့ ဂျပန်ပြည်က သတင်းတပုဒ်ပါ။
“သူတို့ ဟာ အသက်ကြီးနေပြီ ဖြစ်တဲ့ ဘိုးဘွားတွေ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဖော်ပြု လို့တယောက်တည်း နေကြတယ် ပြီးတော့ သူတို့ ရဲ့ ကျမ္မာရေး အခြေအနေတွေ ကို နေ့ စဉ် လာ ပြီး ကြည့်ရှု့ စစ်ဆေး ပေးမဲ့ သီးသန့် သူနာပြုတွေ ငှားဘို့ ကလည်း ပိုက်ဆံ မတတ်နိူင်သူတွေပါ ... ...
၀ါးတုတ်ချောင်းလေး မှာ အ၀ါရောင် လက်ကိုင်ပုဝါစ ချည်ထားတဲ့ အလံ လေးဟာအင်မတန် ရိုးစင်း ပြီး လက်တွေ့ ကျကျ အသုံးဝင်တဲ့ အချက်ပြ လေးပါဘဲ”။
“ဂျပန်နိူင်ငံ တချို့ကျေးရွာတွေမှာ ဘိုးဘွားတွေဟာ သူတို့ ဘယ်လို ဘယ်ပုံ ရှိနေပါတယ် ဆိုတာ ပတ်ဝန်းကျင် အိမ်နီးနားချင်းတွေ ကို အသိပေးနေစေဘို့ ၊ မနက်မနက် ဆို အဲဒီ အ၀ါရောင်အလံ အမှတ်အသားလေး ကို အိမ်အပြင် ဘက်ထုတ်၊ ညနေဘက် မှာ အိမ်ထဲ ပြန်သွင်း ထားလိုက်ကြပါတယ်” လို့မစ္စအဲမိ ခိယောတ (Consultant architect for the International Association of Homes and Services for the ageing) ကပြောပါတယ် တဲ့။
ဒီ နည်းလမ်းရိုးရိုး လေးနဲ့အဲဒီ ရွာသူရွာသားတွေ တဦးနဲ့ တဦး ဂရုစိုက်ကြ ကြည့်ရှု့ ကြဘို့ ထိရောက်တဲ့ ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းတခု ထူထောင်နိူင် ခဲ့ပါတယ်။
“ သူတို့ ဘယ်လို ဘယ်ပုံရှိ နေလည်း ဆိုတာသိဘို့ အမြဲတမ်း အိမ်တံခါး သွားခေါက် ပြီးကြည့်နေစရာ မလို တော့ဘူး .. အ၀ါရောင်အလံလေး က သူတို့ ကိုယ်စား ပြောပြနေပြီမို့ လေ”
“တယောက်ယောက် က သူတို့ ကို ဂရုတစိုက် ရှိနေတယ်လို့ သူတို့ စိတ်ထဲမှာရှိနေကြတယ်”
အငြိမ်းစား ဂျပန်အမျိုးသားကြီး တယောက် ရဲ့ ဇနီးကတော့ ... သူ့ခင်ပွန်းသည် တခြားသွားစရာလည်းမရှိ .. နေ့ တိုင်း အိမ်မှာ တကုတ်ကုတ် နေနေတာ မမြင်ချင်တော့တာနဲ့ သူတို့ ရဲ့first-floor apartment လေးကို ကဖေးဆိုင်လေး အဖြစ် ဖွင့်လိုက်ပါတယ်တဲ့.. သက်ကြီး ပင်စင်နာတွေ အတွက် ဆုံစည်းရာ လေးတခု ဖြစ်သွားတာပေါ့။
ကျနော် လည်း အဲဒီ အချိန် ကြရင် ငယ်ပေါင်း ဘော်ဒါကြီးတွေ နဲ့Same Frequency ဟိုဟိုဒီဒီ ပြောကြ ဆိုနိူင် ကြဘို့ဘော်ဒါတို့ လည်း နေနိုင်ကြပါစေ .. ရှည်ရှည် ..
အဆိုတော် ဘိုတောက် ရဲ့ သီချင်းလေး အော်ဆိုလိုက်မယ် ...
ဒို့ ကတော့ တောပျော် တောမှာဘဲ ပျော်ပျော် နေတော့မယ်
ဒို့ ကတော့ တောပျော် တောမှာ ဘဲ ပျော်ပျော် နေချင်တယ်
Posted by mks at 10:21 PM6comments: Links to this post
လူ့ ယဉ်ကျေးမူ့ အဖွဲ့ အစည်းကြီးသည် .. မည်သို့ မျှသော ကြိုတင်သတိပေးချက် တစုံတရာ မရှိဘဲ ရုတ်ချည်း ပြောင်းလည်းတတ်သည့် .. ကမ္ဘာမြေကြီး၏ ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာ တည်ရှိနေမူ့ဘာဝ နေထား များ၏သဘောအလို အတိုင်း ရပ်တည် ရှင်သန် နေရလေ၏။
ကျွန်တော်တို့ နင်းထားသော ခြေဖ၀ါးအောက်မှ ပထ၀ီမြေထုကြီးသည်...တရွေ့ ရွေ့တွားသွားနေခြင်း၊ အသေးစားတုန်ခါခြင်း၊ ဆန့် ထုတ်ခြင်း.. အပြင်းစားလှုပ်ခါခြင်း စသည် တို့ ဖြင့် သက်ဝင်ရွေ့ လျား နေသည် ဆို၏။
Posted by mks at 9:09 PM 1 comment: Links to this post
ပြန်ရှုံ့ သွားသော သရက်သီး ( Peak of Perfection)
မောင်ဝဏ္ဏ ရဲ့ တမျက်နှာကာတွန်း တပုဒ်ထဲမှာ .. လူတယောက်က ကဗျာ ရွတ်နေပါတယ် ...
ရွှန်းလဲ့ ၀င်းမှည့် ရာမှ
ပြန်ရှုံ့ သွားသော သရက်သီး ..
ခေါင်းစဉ်က အပျိုကြီးတဲ့ ...
တိုက်ဆိုင်တာလေးတွေရှိ နေရင် တောင်းပန်ပါတယ် ...
နုပျို ရုပ်ဆင်း လှပခြင်း လည်း
အိုမင်းနောက်ဆုံး ရှိခြေ၏ .. သံဝေဂ လင်္ကာ ထဲကလိုပါ ဘဲ..
( စိတ်ညစ်သွားရင် ဆက်မဖတ်ပါနဲ့ တော့နော်)
ကျနော့် မှာ အမ အပျိုကြီး၊ ညီမအပျိုကြီး၊ အဒေါ်အပျိုကြီး၊ ကြီးတော် အပျိုကြီး တွေ ရှိပါတယ် .. ဆိုလိုချင်တာက လူတိုင်းသိပြီးသားပါ၊ အနိစ္စ သင်္ခါရ သဘောတွေ...
လူတွေရဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလှဆုံး အချိန်တွေ ...လာပြီး သွား.. ကျော်လွန်သွားပြီးရင် ...
မလှတာတွေ လာတော့ တာဘဲ ..
မလှတာတွေ ဆက်တိုက် မရပ်မနား လာမယ် ပြီးရင်တော့ ... ပြီးသွားပြီပေါ့ ဘ၀တခု ..
အပေါ်က ပုံက G-string နဲ့Granny ကို ကိုပီတာ့ဘလော့မှာ စိတ်ပျိုကိုယ်နု ဆိုတဲ့ Post မှာ အရင်ဆုံး တွေ့ဘူးတယ် .. (ကျေးဇူးပါ ကိုပီတာ)
အရင်တုံးကတော့ မော်ဒယ် ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်ခဲ့မယ်..ခုတော့လည်း မယ်တော် ပေါ့ .... သူလည်း ငယ်စဉ်ဘ၀မှာ သူ့ အောက်ကပုံ ထဲက လို ရွှန်းလဲ့ ၀င်းမှည့် ခဲ့မှာဘဲလေ ..
Google ထဲရှာကြည့်တော့ တနေရာမှာ Old, Funny Women ဆိုပြီးခေါင်းစဉ် ထိုးထားတာတွေ့ တယ်..
ခေါင်းစဉ်ကို သဘောမကျခဲ့ပါ၊ တဖက်က ကြည့် ရင်တော့ life ကို သူ enjoy လုပ်နေတာဘဲ ..ဘ၀ရဲ့ ကန့် လန့် ကာ ကျလာခါနီး ..ပြီးဆုံး ခါနီး အချိန်တွေလေ ..
ဒါမှမဟုတ် အဲဒီ အချိန် မျိုးမှာ ကျနော်တွေးကြည့်တယ် (သွားလှောင် လိုက်ရင် .. သူ့ ရဲ့ ကြည်နူးနေတဲ့ စိတ်အခြေအနေလေး ပျက်သွားမှာ.. စိတ်အားငယ်သွားမှာ.. ကိုယ်ချင်းစာကြည့်တယ်) ဥပက္ခာထား .နားလည်ပေးနိုင်ရင် ..ရီချင်ရင်တောင် ကွယ်ရာမှာရီ ...
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် သူ့life ကို စိတ်ချမ်းသာသလို (ဘယ်သူ့ မှမထိခိုက်ဘဲ) enjoy လုပ်တာ ကို ကျနော်အနေနဲ့ တော့ သဘောကျ အားကျ ပါတယ်..
ကိုယ် ကိုယ်တိုင် တနေ့ ဒီလို အခြေနေ ပုံစံ ရောက်လာဦး မှာမို့ ...
နေရတဲ့ တစ်ဘ၀ .. ပျော်ပျော်သာနေ.. စိတ်ညစ်စရာတွေ အတတ်နိုင်ဆုံး မေ့ထား ..
You only live once, enjoy it.
Posted by mks at 8:00 PM2comments: Links to this post
အာဟာရ သည် ရုပ်ကို ဆောင်၏
ကျနော် တို့ ဒေသ ဘက်မှာ ထူးထူးဆန်းဆန်း စားကြတာ ဆိုလို့( ဒေသခံတွေ အတွက်ကတော့ မထူးဆန်းပါ ) အီကုတ် ဆိုတာရယ် ၊ မြက်မန်းဥ ဆိုတာရယ်ပါ။
အီကုတ် ကတော့ သိကြပါတယ် .. နောက်ချေးပိုး ( Beatle )ကောင် က သူ့ ဥကို နောက်ချေး ထဲ ထည့်ပြီး အဲဒီ နောက်ချေး ကို နောက်ထပ် နောက်ထပ် နောက်ချေး တွေထပ် မံ ပြီး အလုံးကြီး ဖြစ်အောင်လုပ်( တင်းနစ်ဘော့လုံး လောက်ရှိပါတယ်) .. ကျင်းထဲထည့် ထားတာ .. အကောင်လေးပေါက်လာတော့ အကောင်လေးက အတွင်းက နောက်ချေး ကို စားပြီး ဖြေးဖြေး ကြီးလာတာပါ။ အီကုတ် တကျင်းတူး ရင် ၁၀ လုံး ကနေ ၂၀လုံး လောက် အထိရတတ်ပါတယ်။ Field ဆင်းတုံးက အတူပါတဲ့ ရခိုင်က တယောက် အီကုတ် ကို ဒီတိုင်း အရှင်ကြီး ပါးစပ် ထဲထည့်ပြီးစားတာ တွေ့ ဘူးတယ်။
မြက်မန်းဥ ဆိုတာက ပုရွက်ဆိပ် တမျိုး ရဲ့ ဥသေးသေး လေးတွေပါ တကျင်းတွေ့ ရင် ပုလိုင်း တ၀က်ကျော် ရတတ်ပြီး ပြန်ပြုပ်လိုက် ပြီးမှ ဈေးထဲ မှာ ၀ါးကပ်ထုတ်လေးတွေ နဲ့ ရောင်းပါတယ်၊ ဈေးနေ့ညနေဆိုရင် ငါးဖိန်းချက်၊ ပဲပုပ်စေ့ကြော်၊ မြက်မန်းဥသုတ် အားပါးပါး တကယ် ထမင်းမြိန်တာပါ။
နေရာဒေသ လိုက်ပြီး အစားအသောက် ဓလေ့ ပုံစံ တွေ ကွာသွားကြ ပါတယ်။
ကမ္ဘာတလွှား ဆန်းဆန်းပြားပြား ထူးထူးဆန်းဆန်း တွေ စားကြတာ တီဗီ အစီအစဉ်တွေမှာ ရိုက်ပြထားတာတွေလည်း အများကြီး ကြည့်ခဲ့ဘူးပြီးပါပြီ။ တလောလေးတုံးက ဥရောပ (အီတလီ ထင်ပါတယ်) နိူင်ငံတခုမှာ တီကောင်တွေ ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ ချက်ပြုတ် ပြင်ဆင်ပြီး ပါတီ တခုမှာကျွေးတာ ကြည့်လိုက်ရသေးတယ်။
One important point is that while there are poisonous plants (never eatawild mushroom), all living animals are safe to eat. ဆိုဘဲ ....
ဆုံဘူးတဲ့ ရဲဘော်တယောက် ပြောပြဘူး ပါတယ်။ အခြေအနေ ပေးရင် ရိုးမတက်ပြီး ကြွက် ပစ်တယ်တဲ့ .. အဆန်းပါလား ဆိုတော့ .. စကားဝှက် နဲ့ကြွက် ဆိုတာ ဆင်ကို ခေါ်တာတဲ့ .. အစွယ်ဈေးကောင်း တယ်ဆိုတာကိုး .. အော်တိုမက်တစ် ရိုင်ဖယ်တွေ နဲ့ဆိုတော့ ဆင့် အဘ လည်းလာထားဘဲ .. ရိုင်ဖယ် .. မိုင်နှစ်ဆယ်.. တိုင်ကွယ်.. နေတောင် မရဘူး တဲ့..
အဲလို သတ်ပြီး အစွယ်ဖြတ် သွားတဲ့ ဆင်သေတကောင် .. တောထဲ မှာ တွေ့ ဘူးတယ် .. အလုပ်သမားတွေ ကတော့ စားဘို့အသားတွေယူကြ ပါတယ် .. မစားရဲ လို့ မစားခဲ့ဘူးပါ။
တဖက် က စားလို့ ရတာ အကုန်စား အင်းဆက်တွေ တီ ကောင် တွေတောင် စားလာကြသလို တဖက် ကလည်း ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး အတွက် အသားစား လျှော့ဘို့တနင်္လာတရက် အသားမစားနေ့လုပ်ကြဘို့ ဆော်သြလာ ကြတယ်။
ဆိုင်မဆိုင်တော့ မသိပါ .. ဒီဘက်ခေတ် လူတွေသိသိသာသာ ၀ လာကြ တာ မွေးမြူရေး ကြက် ၀က် တွေ ကို ကျွေး/ထိုး တဲ့ အသားတိုးဆေးတွေရဲ့ဓါတ်ကြွင်း တွေကလည်း တနည်းနည်း ပတ်သက် နေ မယ်လို့ထင်ပါတယ် ။ တခါတခါ ရမ်းချတာလည်း တည့်တည့်ကျတတ်တာမို့ ...း))
ဆေးထိုးရင် အတောင်ပံ မှာထိုးတာများလို့ ကြက်တောင်ပံ လျှော့စား လို့ လည်းပြောကြပါသေးတယ်။
တခါကလည်း .. ကျနော်တို့ ဆီမှာ နွားတကောင် ကို ဂေါ်ဖီထုပ် အခွံတွေ ကျွေးလိုက်တာ နွားကြီး ဘိုင်းကနဲ လဲသေ သွားတာ မြင်ဘူးခဲ့ပါတယ်။ ပိုးသတ်ဆေး ဖျန်းပြီးစ ဂေါ်ဖီထုပ် ဖြစ်မှာပါ။ နောက်ပြီး ပန်းဂေါ်ဖီ ဆိုတာလည်း အင်မတန် ပိုးကျတတ်တာ မို့ပိုးသတ်ဆေး မကြာမကြာ ဖျန်းတတ်ကြပါတယ်... ရေကြာကြာဆေးကြ ပေါ့ဗျာ.. Green House နဲ့ စိုက်တာ တို့Organic Farming ကတို့ ကိုတော့ မဆိုလိုပါ...
ကျနော်တို့ရွာမှာက တိတိကျကျ စစ်ဆေးတာ မျိုး .. အရေးယူတာမျိုး မရှိတာ မို့စိုက်ပျိုးတဲ့ သူတွေ အချို့ ကတော့ သီးနှံ ဖြစ်ထွန်းရေး ဈေးကောင်းရရေး ကိုဘဲ .. ပိုဦးတည်မှာပါ .. အသိ ပညာပေးတာတွေ နဲ့ ဝေး နေကြသူ တွေ ပိုးသတ်ဆေး အသုံးပြုနည်း အားနည်းနေကြသူတွေ .. ကိုယ်ကျိုး တခုဘဲ ကြည့်သူတွေ ပေါ့။
သက်သတ်လွတ် စား တဲ့ လူတွေ များလာနေပေမဲ့ ကျနော့်မှာ စိတ်ကူးဘဲ ရှိပြီး အကောင်ထည်တော့ မဖော်နိူင်သေးပါ ..အသား စားတာ(နည်းနည်း) လျှော့နေပါတယ်၊ Meat-reducer တောင် မဟုတ်သေး ပါဘူး။
သက်သတ်လွတ် စားတာ ကို လည်းဒီလိုအဆင့်ဆင့် ခွဲထားကြ သေးတယ်တဲ့ ...
(VEGGIE VOCAB) )
Someone who does not eat meat or fish
A strict vegetarian who doesn't eat any animal products at all, including egg and dairy food
Someone who cuts down on meat intake
Someone who is usually vegetarian, but may eat meat occasionally
စားလို့ ရတာ အကုန်စိုက်
စိုက်လို့ ရတာတော့ အကုန် မစား လေ နဲ့..
ကြက်ဆူတွေ သွားစားရင် ပန်း ကမ္ဘာ လေး ထဲရောက်သွား မှာပေါ့ ... :0)
Posted by mks at 9:23 PM2comments: Links to this post
ဘိလပ်ရည် ကို ကျနော် သိပ်ကြိုက်ပါတယ်၊ ငယ်ငယ်တုံးက သောက်ခဲ့တဲ့ ကျနော်တို့ မြို့ က ဒေါ်နန်းဗွေ ဘိလပ်ရည် စက်က ထုတ်တဲ့ တမတ်တန်ဘိလပ်ရည် ပုလင်းလေးတွေ မှတ်မိနေပါသေးတယ်။ ပုလင်းမှာ သီးသန့်အဖုန်းရယ်လို့ မရှိဘဲ ပုလင်းရဲ့ လည်တိုင် မှာ ဖန်ဂေါ်လီလုံးလေး တလုံး (Valve လို) အောက်ကGas ပင့်အားနဲ့ပိတ်နေပြီး ဖွင့် သောက်တဲ့ အခါမှ အဲဒီ ဂေါ်လီလေး ကိုအောက်ဖိချလိုက်ရ တာ..နောက်ပိုင်း တော့ဘယ်မှာမှ မတွေ့ ရ တော့ဘူး ..
ဒီပုံထဲက ပုလင်း မျိုး ပါဘဲ
ငယ်ကတည်း က အချိုကြိုက် တဲ့ ကျနော် ဒေါ်နန်းဗွေ ဆိုင်ရှေ့ ရောက်ရင် အမေ့ လက်ဆွဲပြီး ဘိလပ်ရည် ၀ယ် ခိုင်း တတ်တာမို့ကျနော် ပါရင် အမေ အဲဒီဆိုင်ရှေ့ကို ရှောင်ပြီးသွားပါသတဲ့။
ဟိုတုန်းကတော့ ဘိလပ် က လာတဲ့ လူတွေ ယူလာပြီး သောက်ကြလို့ ဘိလပ်ရေ ..ဆိုပြီးခေါ် တာထင်ပါ တယ်၊ကျနော်တို့ ရဲ့ နာမည်တွေ ကို မိဘတွေက ကင်ပွန်းတပ် မှည့်ခေါ်ထားကြတာသလိုမျိုး..တယောက်ယောက်က စခေါ်ခဲ့ မှာဘဲ ..
နာမည်အခေါ်အဝေါ် တွေ ဘယ်လိုစဉ်းစားပြီး ပေးခဲ့ကြလည်း စိတ်ဝင်စားစရာပါ ... ဒါကတော့ ၀က်၊ ဒါကို သေတ္တာ ဟိုဥစ္စာတံမြက်စည်း .. စသည်ဖြင့် စသည်ဖြင့် ..( အများညီ “ ဤ” ကို “ကျွဲ ” ဖတ်လို့ ရ တယ် ဆိုသလိုမျိုး)
Pig meat ကို pork, Cow(ox) meat ကို beef ခေါ်ကြသလို Australia နိုင်ငံ ရဲ့National Icon သားပိုက်ကောင်ရဲ့ အသား Kangaroo meat ကိုတော့ australus ဆိုပြီး ကင်ပွန်းတပ်ထားကြောင်း ဖတ်လိုက်ရပါတယ်၊
ကျနော် ကတော့ ခုမှသိတာပါ .. သူများ နောက်ကချည့်ပါဘဲ။
အဲ ဘိလပ်ရည် ဆိုတော့လည်း ဘိလပ်ရည် ပေါ့နော ..
ဘိလပ်ရည် နဲ့ ပါတ်သက်လို့စင်္ကာပူက ဖရီး ဝေတဲ့ Today သတင်းစာမှာ ရေးထားတဲ့ ...
လေ့လာတွေ့ ရှိချက် တွေအရ အစီရင်ခံစာတစောင်မှာ ...တပါတ်ကို ဘိလပ်ရည် ( Sugared soft drinks) သံဘူး ၂ဘူး ထက် ပိုမသောက်သင့် ပါဘူးတဲ့၊ .. ပိုသောက်ရင် ပန်ခရိယကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေ အခွင့်လမ်း ၈၇% ပိုပါတယ်တဲ့၊ ဒါပေမဲ့ Fruit Juice တွေ သောက်သုံး ခြင်းနဲ့ပန်ခရိယကင်ဆာ တို့ အကြား ဆက်နွယ်နေမူ့ တော့ မတွေ့ ရဘူးဆိုပါတယ်၊
ကင်ဆာရောဂါ ဆိုင်ရာ ပါရဂူ တဦးကတော့ ဘိလပ်ရည် နဲ့အဲဒီလို ဆက်နွယ်နေတယ် လို့ ပြောဘို့ စောသေးတယ်တဲ့ဗျ။
ကြိုက်လို့ သောက်နေပေမဲ့ ဆီးချို ဖြစ်မယ်လောက် ကြားခဲ့ဘူး တာကိုး ... ပန်ခရိယကင်ဆာ ဆိုတော့ နဲနဲတော့ ပို ဖြုံ သွားတယ်ဗျ။ ... သို့ ပေသော်လည်း ...
စင်္ကာပူ ကင်ဆာဌာန တခုက .. ဆေးပညာညွန်ကြားရေးမှူး ဆရာဝန်ကြီးတဦးပြောလိုက်တဲ့ စကား ကိုဘဲ ငှားသုံး ပြီးပြောပါရစေ ...
“ ကျနော် တပါတ် ကို ဘိလပ်ရည် သံဘူး ၂ဘူးထက် ပို သောက်ပါတယ် .... ဒါပေမဲ့ ဒီအစီရင်ခံစာကြောင့် တော့ ကျနော့်ရဲ့ ဘိလပ်ရည် သောက်တဲ့ အကျင့်ကို ပြောင်းလိုက်ဘို့ တော့ မရှိပါဘူး”
Posted by mks at 11:08 PM5comments: Links to this post
Whatever Law, I have to follow
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ် ၃နှစ် လောက်တုံးက သြစတြေးလျ နိူင်ငံသား ဗီယက်နမ်လူမျိုး တယောက် ဘန်ကောက် ကလာပြီး သြစတြေးလျ ကို ခရီးဆက်ဖို့လေဆိပ် မှာတထောက် နား နေတုံး ကာစတန် တွေ က ဘိန်းဖြူ တွေ စစ်ဆေးတွေ့လို့ ဆိုပြီး ဖမ်း ပြီး သေဒါဏ် ပေး လိုက်တာ ကို ပြန်စဉ်းစားမိပါတယ်၊ စာရေးရင်တော့ သေဒါဏ်ချမှတ်တယ်ပေါ့ ပါးစပ် စကားပြောရင်တော့ ဖမ်းချုပ်ပြီး သတ်ပစ်လိုက်တယ် ပြောမှာပေါ့ ဒီနေရာမှာ ဒဲ့သွားပြောလို့ တော့ဘယ်ရမှာလည်း နော်။
ကျနော့် ဖာသာ ဟိုတွေးဒီတွေး တွေးမိ ခဲ့တာ တွေ ကို “တော်တော် ထူ တဲ့ ငါ့ အတွေးအချော် တွေပါ လား” လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကို လည်းမြင်လာ ပါတယ်.. ထူ ဒူ တာတွေ ချရေး ကြည့်တာပါ .. အင်မတန် ညာဏ်နည်းတာဘဲ လို့ပြောသွားလည်း လက်ခံ ပါ တယ်။ တဖက်သားရဲ့အမြင်ဘဲ ..
အရက်သောက်ရင်.. နည်းရင် ရီတီတီ များရင်ဒေါင်ချာစိုင်း မူးမယ်
ဆေးခြောက် ....... မူးမယ် ကြောင်မယ်
ဘိန်း၊ ဘိန်းဖြူ ၊ ရာဘ
Codeine ပါတဲ့ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးတွေ ( ငါး )
နောက် .. ပြောရရင်
တိုင် ပတ်ချာလည်ပြေးလည်း မူးတာဘဲ..
ရာဘ က လွဲလို့အပေါ်က ရေးထားတဲ့ မူးယစ် စေတတ်တဲ့ အရာ အားလုံး သုံး ခဲ့ဘူးပါတယ်၊ ကျောင်းတက်တုံး က ဘိန်းဖြူ အစိတ်ဘိုး ဆိုရင် စက္ကူ ခေါက် လေးနဲ့ ထုတ်ထားတဲ့ အထုတ်သေးလေး တထုတ် ဒူးယားစီးကရက်ထဲ ၈-ကန့် လောက်ထည့်ရင် ၂-လိပ်စာ ရပါတယ်။ စီးကရက်ထဲကဗာဂျီးနီးယားဆေး တွေ ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ ဆေးတကန့်ဘိန်းဖြူ တကန့် ပြန်ထည့် ၊ နောက် မီးဖြေးဖြေးဘဲ လောင်အောင် အပေါ်စက္ကူသား ကို တံတွေး ဆွတ် ပြီး ရှူ ရှိုက် တာ ဟိုး အရင်တုံးက ပုံစံတွေပါ၊ ဒုတ်တင်တယ် ခေါ်တဲ့ ဆေးထိုးအပ် နဲ့အကြောထဲ ထိုးတာတော့ မလုပ်ခဲ့ဘူးပါ။
ဆေးခြောက် ကတော့ ကျနော်တို့ မြို့ လေးမှာ အလေ့ကျတောင် ပေါက်တာပါ၊အပျော်ရှူခဲ့ဘူး ကြက်သားနဲ့ ချက်စားခဲ့ဘူးပါတယ်။ ဆေးခြောက် ကို အရင်တုံးက ဘန်းစကားက ဆရာကြီး တဲ့ ....
လူငယ်ဘ၀ စမ်းသပ် ခဲ့ဘူးပေမဲ့ အဲဒီ မူးယစ်နေတဲ့ ဖီလင်ကို မကြိုက်ခဲ့လို့မစွဲ ခဲ့ပါဘူး။
အပေါ်က အကြောင်းလေးပြန်ဆက်ပါရစေ .. အဲဒီ ဗီယက်နမ်နွယ်ဖွား သြစတေးလျ နိုင်ငံသား ဟာ ဘယ်လို ရည်ရွယ်ချက် နဲ့ဘိန်းဖြူ တွေ ယူလာတယ် ဆိုတာတော့ ကျနော် မဖတ်မိ မမှတ်မိပါ၊ အဲတုန်း က သြစီ ၀န်ကြီးချုပ် လည်း သေဒါဏ် မချ ဘို့ ကို မေတ္တာ ရပ်ခံ ပေး သေးပေမဲ့ မအောင်မြင်ခဲ့ပါ .. သေဒါဏ်ပေး (သတ်ပစ်) လိုက်ပါတယ်။
သူ မသေချင် လည်း မရပါဘူး ..
လူသားမျိုးနွယ် တရပ်လုံး ကို ခြိမ်းခြောက် နေတဲ့ ဘိန်းဖြူ ဆိုပြီး ဖတ်ခဲ့ဘူးတယ် .. ဘွင်းဘွင်း ပြောရရင် အဲဒါ ကြောင်တောင်တောင် ကြီး လိုဘဲ ..
ဒီဘိန်းဖြူ ( ကိုကိန်း ဆေးခြောက် စသည် စသည် အပါအ၀င်) မူးယစ်ဆေးတွေ ကို မိမိ ကိုယ်တိုင် နှစ်သက်လို့သုံးစွဲရင် လည်း အဖမ်း ခံ ရ .. အသတ်ခံရ ၊ တကမ္ဘာ လုံးက ဥပဒေ တွေ က အားလုံးနီးနီး အတူတူ တွေ ချမှတ်ထားတာ ဆိုတော့ လည်း..
တလောက သတင်းတွေမှာ ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေ လက်နက် ဗုန်း သေနတ် ဒုန်းကျည်တွေ တန်ချိန် ၃၅ တန် ပါ မြောက်ကိုးရီးယား ကလာတဲ့ ကုန်တင်လေယာဉ် တစီး ဘန်ကောက်လေဆိပ် မှာ လေယာဉ်ဆီ ဖြည့်ဘို့တထောက်ဝင် နားတာ လက်နက် တွေ တွေ့ ပြီး အဖမ်းခံရပါတယ် ..နောက်တော့ သယ်လာတဲ့ လေယာဉ် အမူ့ ထမ်း ၅ ယောက် ကို အရေးမယူ ဘဲ အပြစ်လွတ်မယ် ဆိုပြီး ဖတ်ရပါတယ်။
ဒီလက်နက် ၃၅တန် ဟာ လူဘယ်နှစ်ယောက် ကို သေစေနိူင်ပါလည်း ...
ပြီးခဲ့တဲ့ ဘိန်းဖြူ သယ်လာတဲ့ သူ နဲ့ကျနော် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မိပါတယ်။
ကျနော့ဥာဏ် တထွာတမိုက်နဲ့.. ရီစရာ ဖြစ်နေရော့မယ်...
ဒီ အဖြစ်အပျက် လေး တခု ကို လည်း ဖတ်ကြည့် ပါဦး -----
တခါတုံး က တရားရုံး တခု ၌ .. ပြည့်တန်ဆာမူ့ တခုကို စီရင် ရာတွင် ..
တရားသူကြီးက “ မယ်မင်း သည် အခကြေးငွေယူ ပြီး မိမိကိုယ် ကို ရင်းနှီး ပျော်ပါးနေ စဉ် ဖမ်းဆီးရမိ သောကြောင့် အပြစ်ဒါဏ်ချမှတ်ရန်အတွက် အပြစ်ရှိ ကြောင်းဝန်ခံပါ ” ဟု ဆိုလိုက်ရာ..
ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ကိုင်စားသူ အမျိုးသမီး မှ ..“ အပြစ်ရှိ ပါတယ်ရှင် .. အပြစ်ရှိပါတယ် .. အရင်ကတော့ ကျမ အမေ မွေးကတည်း ကပါတဲ့ ပစ္စည်း ကျမ ပိုင်တယ် ထင်လို့xါသည် လုပ်စားတာပါ၊ အခုမှ ကျမ ပစ္စည်း ကျမ မပိုင်ဘဲ အစိုးရ က ပိုင်တာ သိရပါတယ် ဒါကြောင့် အပြစ် ရှိပါတယ် ရှင် ” ပြောလိုက်ပါသတဲ့... ( စကားလုံးအသုံးနှုန်းတွေ အတွက် ဆောရီးပါ)
ဂွတော့ကျပါတယ် ... ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် “Whatever Law, I have to follow.”
(ကျနော့ ရဲ့ဟိုဟိုဒီဒီ မျှသာပါ .. ဘိန်းဖြူ မူးယစ်ဆေးသမားတွေ ကို ထောက်ခံ/ကန့် ကွက်သူတယောက်တော့ မဟုတ်ပါ ခင်ဗျား)
ကျနော့် မဒမ် ကတော့ Draft ဖတ်ပြီး ရှူံ့ ချသွားပါတယ်။
Posted by mks at 4:45 PM4comments: Links to this post
ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း မှာ အောင်ပန်း၊ ကလော တို့ ကို သိသူ များပေမဲ့ သာမိုင်းခမ်း ဆိုတဲ့ အမည်ကို တော့သိသူ ကြားဘူး ကြသူအတော် နည်းမှာပါ...
အောင်ပန်းမြို့ ဟာ သာမိုင်းခမ်းစော်ဘွား နယ်ထဲ ကစတင်ပေါက်ဖွားလာခဲ့တာ ဖြစ်သလို .. ကလောမြို့ ဟာ လည်း ယခင်က သာမိုင်းခမ်း အပိုင် လွယ်အန်နယ်ထဲက ရွာတရွာပါ တောင်ကုန်းတွေက ပတ်လည် ၀န်းရံပြီး ချိုင့် ဝှမ်း လျှိုမြောင် တွေနဲ့ တောင်လားချောင်း က ရစ် ခွေစီးနေကာ ထူထပ်စိမ်းမှောင်တဲ့ ထင်းရူးတော တွေ ချယ်ရီပင် ၀က်သစ်ချပင် သစ်တော့ရိုင်းပင် တွေနဲ့ လှပနှစ်သက်စရာ နေရာအဖြစ် ကလော ကို အင်္ဂလိပ် က မှတ်တမ်း တင်ခဲ့ပါတယ်။ ကလော ဟာ ၀န်ထောက်ရုံး အပြင် တောင်စခန်း အဖြစ် အင်္ဂလိပ် တွေက ရည်ရွယ်ထားပါတယ်၊ ရာသီဥတု သဘာဝရှု့ ခင်းနဲ့ စိတ်ကူးယဉ်စရာ ရှမ်းမြေလပ် ဒေသ ကို အင်္ဂလိပ် က “ စကော့တလန်” အဖြစ်တင်စားပါသတဲ့။
သာမိုင်းခမ်း စော်ဘွား (ငွေခွန်မှုး )မင်းမောင်ဖိုး လက်ထက်မှာ အောင်ပန်း မြို့ ကွက်ချပေးပြီးတော့ ထူထောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်၊ သာမိုင်းခမ်း ၂၁ ခေါင်း၊မကွေ လွယ်အန် ကလော ဘန့် ဖာ ကျေးရွာခရိုင်ကို အစိုးရသော “မဟာငွေခွန်တော်မှူး မင်းကြီး မင်းမောင်ဘိုး” လို့နယ်မြေပိုင်ဆိုင်ခြင်း ဂုဏ်ဒြပ် နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖော်ပြလေ့ရှိ ပါသတဲ့။
သီပေါမင်းပါတော်မူ ပြီးနောက် သာမိုင်းခမ်း အပါအ၀င်ရှမ်းမြေ လတ် ငွေခွန်မှုးနယ် ကိုစီမံ အုပ်ချုပ် ဖို့အနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထောက်ရုံး (Western sub-division) ကို သာမိုင်းခမ်း တောင်ဘက် ကုန်းပေါ်မှာ အင်္ဂလိပ် တို့ ရုံး စိုက်ထူခဲ့ပါတယ်၊ ရှမ်းမြေလပ်နယ်(မြေလတ်) ပင်းတယ၊ ပွေးလှ၊ ရွာငံ၊ ဘော်၊ လွယ်လုံ၊ ဘော်နင်း ၊ ကျုံး ၊ပင်မှီနယ် တွေဟာ ဒီ အနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထောက်ရုံး ရဲ့ကြည့်ကြပ် မှု့ အောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ အင်္ဂလိပ် တို့ အနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထောက်ရုံး စိုက်ရန် နေရာသစ် အတွက် ကလော ကိုရွေးချယ် ခဲ့ကြပါတယ်၊ ကလောမှာ မြို့ ပြတည်ထောင်ပြီး အင်္ဂလိပ်တို့ တိုက်ရိုတ် အုပ်ချုပ်တဲ့ သီးသန့် နယ်မြေ (Notified Area) အဖြစ် ကြေညာ ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်၊လားရှိုး ၊လွိုင်လင်၊ တောင်ကြီး၊ လွိုင်မွေ တို့ လို သီး သန့် မြို့ တည်ထောင် ရန် အဆင့်ဆင့် ပြင်ဆင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ် ၁၉၀၀ ကျော်နှစ်များ ကပါ၊
ကလောမြို့ တည်ထောင်ဖို့ အတွက် သာမိုင်းခမ်းပိုင်နယ်မြေ လွဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်းစာချုပ် ကို သာမိုင်းခမ်း စော်ဘွား လက်မှတ်ထိုး ခဲ့ပြီး .. ရမည်းသင်းနယ် ရေအေးကြိုးဝိုင်းရဲ့ ဧရိယာ၂၄ မိုင် ကိုလည်း ကလော အနာဂတ် ရေပေးဝေရေး အတွက် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း သစ်တောဌာန ကိုလွဲပြောင်းပြီး သာမိုင်းခမ်း နယ်ထဲ ထည့်သွင်းဖို့ ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။
သာမိုင်းခမ်းစော်ဘွားက အစိုးရထံ သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ အခွင့်အရေး လွဲပြောင်းပေးပြီးဖြစ်လို့ ကလောမြို့ ဟာ မြန်မာ မြူနီစပယ် အက်ဥပဒေ(၁၈၉၈) အရ သီးသန့် နယ်မြေတခုအဖြစ် ၁၉၁၄ ဇန္န၀ါရီလ (၁)ရက်နေ့ က အစပြုပြီးတရားဝင် ဖြစ်ပေါ်တော့မှာပါ၊
၀န်ထောက်ရုံးကို သာမိုင်းခမ်းမှ ကလော သို့ ပြောင်းဖို့ ပြင်ဆင်နေစဉ် မှာဘဲ လူဝင် လူထွက် စည်ကား များပြား လာတဲ့ ယ္ခု အောင်ပန်းမြို့ တည်ရာ နေရာကိုလည်း မင်းမောင်ဘိုး ခွင့်ပြုချက် နဲ့၁၉၁၃ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၅ရက် (၁၂၇၅ခုနှစ်မြန်မာနှစ်ဆန်းတရက်) မှာ မြို့ ပန္နက်ရိုက် အစပြုလိုက်ပါတယ်။ (ကျနော့်မိခင် ပြောပြလို့အောင်ကျော်ထူးဆန်း မြို့ အောင်ပန်း ဆိုပြီး မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၇၃ မှာစခဲ့တာလို့ လည်း မှတ်သားဘူးပါ တယ် တရားဝင် ပန္နက် ရိုက်တဲ့ နှစ်တော့ ဟုတ်ဟန်မတူပါ)၊
ကိုလိုနီခေတ် ၁၈၉၇ ခုနှစ် မှတ်တမ်း အရ သာမိုင်းခမ်းနယ် ဟာ ၂၉၆.၆ မိုင် ဧရိယာ ရှိပါတယ်
တောင်ရိုး - ၅၀၁၇
တောင်သူ (ပအိုဝ်) - ၄၄၈၃
ဓနူ - ၂၁၄၆
ရှမ်း - ၁၅၃
အင်းသား - ၁၁၆
ပလောင် - ၁၀၄
ဗမာ - ၆၂ ယောက် ရှိပါတယ်တဲ့။
၁၉၁၅ ခုနှစ် အောင်ပန်းဘူတာ ဖွင့်လှစ်ပြီးတဲ့နောက် တော့ အရပ်ရပ် ရောင်းဝယ် ဖောက်ကား အခြေချ နေထိုင်သူတွေ များလာတာနဲ့ အတူ အောင်ပန်း လည်း စည်ပင် လာခဲ့ပါတယ်၊ မြန်မာပြည်အရပ်ရပ်က လူတွေလည်းလာရောက်စ ပြုပါပြီ အရောင်းအ၀ယ် လုပ်သူ၊ အမှုထမ်းလုပ်သူ၊ နိုင်ငံခြားသား တရုတ်၊ ကုလား တွေလည်း ရောက်ရှိ နေပြီဖြစ်ပါတယ်၊ တချို့ အခြေစိုက်ကြပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်ရည်မှန်းသလို ကလော က ကုန်သွယ်ဗဟို ( Trading Centre) ဖြစ် မလာခဲ့ဘဲ အောင်ပန်းက မထင်မှတ်ဘဲ ဖြစ်လာပါတယ်။
စော်ဘွားအိုကြီး ကွယ်လွန်ပြီးနောက် မြေးတော်သူ စ၀်ထွန်းအေး ဆက်ခံတော့ ဟော် ကို အောင်ပန်း မှာ ဆောက်ပြီးအခြေစိုက် ပါတယ်။
နောက်တည် အရံမြို့ ဖြစ်တဲ့ အောင်ပန်း စည်ပင်တိုးတက်လာပေမဲ့ မိခင်မြို့ သာမိုင်းခမ်း မှာတော့ မှေးမှိန်ပြီး ကျန်ရစ်ခဲ့တာဟာ ရထား ကား လမ်းတွေ ရှောင်ကွင်းဖောက်သွားတာဟာလည်း တစိတ်တပိုင်းတော့ သက်ဆိုင် နေမည်ထင်ပါသည် ။ ( သာမိုင်းခမ်း ရွာ သည်ယ္ခု အောင်ပန်းမြို့ ၏ အရှေ့ ဘက် ၄မိုင် ခန့် အ ကွာတွင်တည်ရှိပါသည်)
“ဆရာဦးမြင့်သန်း” ၏ “ အောင်ပန်း (သို့ မဟုတ်) မြို့ သစ်တမြို့ မွေးဖွားခြင်း” မှ စာပိုဒ်များကူးယူ ဖော်ပြပါသည်။
Posted by mks at 7:59 PM6comments: Links to this post
ကွမ်းသီး အင်ဒို နဲ့ 
စာသား အတင်းထည့်ထားပါကြောင်း( ပစ္စည်းအားလုံး ရွာမှ လှေနဲ့ လာပါသတဲ့)
ကွမ်း ဆိုလို့ငယ်တုံးက ကျနော်တို့ မြို့ လေး မှာ အဒူလာ ရောင်းတဲ့ ကွမ်းယာ အချို စစားဘူး တာပါ၊ ကွမ်းရွက် ကို ထုံး ရှားစေး သုတ်၊ ကွမ်းသီးအလှော်၊ အုန်းယို နည်းနည်း နာနတ်ယို ဘိန်းစေ့ အမွှေးရည် ပရုပ် စသည်ဖြင့် (ဆေးမထည့်ပါ).. ဝါးပြီး အရည်ကို မြိုချတယ် .. နောက် အဖတ်တောင် မကျန်တော့ တာပါ ..
နည်းနည်းကြီးလာတော့ သူများတွေ က ထုံး ကွမ်းသီး ဗမာဆေး .. ဆိုပြီး မှာစားကြတော့ ကိုယ်ကလည်း ငါ ကလေးမဟုတ်တော့ လုပ်ပြီး .. သူများတွေလို လိုက် တုပြီးစားကြည့်တာပေါ့ .. မူးလိုက်တာ ခေါင်းတွေ အုံခဲ နေပြီး အန်လည်း အန်သေး .. တခါတည်း လှန်တာဘဲ .. ကွမ်း အရသာကို မခံစား တတ်သလို စားလည်း မစားဖြစ်တော့ပါ။
မန္တလေး မှာ ကျောင်း တက်တုံးက သူငယ်ချင်းတွေ က ကွမ်းကြိုက်ကြသူတွေပါ .. ၁၁မှတ် ကွမ်းယာ (အမှတ်၁၁ ရဲစခန်းရှေ့ ဆိုင်) နာမည်ကြီးပေါ့ .. ဇရပ်ကြီးသား သိန်းလွင် ဆိုရင် အဆောင်ထမင်းစား သံချောင်း ခေါက်ရင် စားလက်စ ကွမ်းကို ပါးစပ်က ထုတ် .. ပြူတင်းဘောင်ပေါ်တင်ခဲ့ပြီး ထမင်းသွားစား .. ပြီးတော့ပြန်လာရင် အဲဒီ ကွမ်းကို ပြန်မြုံ့ ပါတယ်။
ဘူမိဗေဒလေ့လာရေး နှင့် ဓါတ်သတ္တုရှာဖွေရေး ဦးစီးဌာနမှာ အလုပ်ဝင်တော့ ကရင်ပြည်နယ်ဘက် ကွင်းဆင်းတဲ့ သူတွေပြန်ပြောပြတာ ... ငှားထားတဲ့ အလုပ်သမားတွေ တောထဲ ကွင်းဆင်းလိုက်ရင် မြန်မာဆေးရွက်ကြီး ဘဲထည့်လာတယ် ရွာပျက်တွေမှာ ကွမ်းသီးတွေခူး အလေ့ပေါက်တဲ့ ကွမ်းရွက်တွေ ကလည်းပေါ .. အဲ.. ထုံးအတွက်တော့ .. ချောင်းဘေးက ခရုခွံ တွေကောက် ပြီး ၀ါးကျည်တောက် ထဲထည့် မီးဖုတ်တယ်တဲ့ .. ထုံးဖုတ်သလိုပေါ့ နောက် ရေနဲ့ ပြန်နှပ် ရော ခရုခွံCaCO3 ကို ဖုတ်တော့ CaO ,ရေပြန်ရောတော့ Ca(OH)2 ဟုတ်မလားမသိဘူး မှားနေရင် ပြင်ဖတ်ပါနော်။
၀ါးသူတို့ ရဲ့ထွေးထုတ် ခြင်း ဒါဏ်ကြောင့် ပင်နီစူလာပလာဇာတ၀ိုက် သည် ကွမ်းသွေးတို့ ဖြင့် ရဲရဲနီ၏ ..သို့ သော် ကျွတ်ကား မကျွတ် ..
ကျနော်တို့ တတွေဟာ ရိုးရာဓလေ့ကို အင်မတန်ထိန်းသိမ်း တတ်ကြသူတွေပါ။ ပင်နီစူလာပလာဇာ ဘက်ရောက် ခဲ့ ရင် ဘယ်လောက်ပင် အမိမြေ နှင့် ဝေး ကွာနေစေကာမူ ကွမ်းစားခြင်း ဓလေ့ ထိန်းထား ကြတဲ့ ကျနော်တို့အမျိုးသား တွေကို တွေ့ နိုင်ပါတယ်၊ တံတွေး ထွေးရင် ရေအိမ်ထဲ သွားကြဘို့ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ ၂ဘာသာ နဲ့သတိပေး ထားတဲ့ ဆိုင်းဘုတ် ကို လေးစားသမူ့ ပြု တဲ့ အနေနဲ့ဦးခေါင်းကိုငုံ့ ၊ ခါးကို ညွှတ်ပြီး ဆိုင်းဘုတ် အောက်တည့်တည့် က အမှိုက်ပုံး ထဲကို ပျစ်ကနဲ ပျစ်ကနဲ တယောက်ပြီး တယောက် လာ Discharge လုပ်ကြ တာ တွေ့ ကြမှာပါ။ အောက်ထပ် ပတ်ပတ်လည် ရေမြောင်း တွေမှာ လည်း ဒီနေရာကို ကျနော်တို့ ရောက်ခဲ့တယ် လို့ ရဲရဲတောက် အမှတ်တရ သင်္ကေတတွေ ထား ရစ်ခဲ့ကြတာ .. မှတ်မှတ်ရရ ဖြစ်စရာလေး တွေပေါ့ဗျာ ..
တခါကလည်း လမ်းဘေး မြက်ခင်းထဲ ဗျစ်ကနဲ ထွေးထည့်လိုက်တဲ့ အမျိုးသား တယောက်ကို စင်္ကာပူရီးယန်း တယောက် က စိုးရိမ်တဲ့ မျက်နှာနဲ့ လာခဲ့ပြီး “ ငါ ဘာကူညီရ မှာလည်းဟင် .. Ambulance ခေါ်ပေးရမလား” လို့ မေး တယ်တဲ့ သွေးအံတယ် လို့ ထင်နေတာ ကိုး။(ထုံ ချက်)
ကိုင်း .. ဒီလောက် စားနေကြတဲ့ ကွမ်း.. မကောင်းရင် ဘယ်သူစား လိမ့်မလည်း ..
ကျနော်မစားရင် ပင်နီစူလာ တ၀ိုက် အမှတ်တရ မချန်ခဲ့ နိူင်တဲ့သူ ဖြစ်နေလိမ့်မယ် ... ဒီတော့ ..
ကဲ လာထား “ နိုင်တီတူး နဲ့ တကျပ်ဘိုး”
( နိူင်တီတူး = အိန္ဒိယ မှလာတဲ့ ကွမ်းစားဆေးတမျိုးတံဆိပ် အမည်)
Posted by mks at 9:11 PM2comments: Links to this post
ဖတ်လိုက်မိတဲ့ သတင်းအကြောင်းအရာလေး တပိုဒ် ကို ပြန် ဖောက်သည်ချ ပါရစေ ။ ဖတ်မိပြီး သားဖြစ်နေရင်လည်း သည်းခံ ပါနော်။
One sip of this brand of coffee can give youalift. Although not the kind of lift you would expect from coffee.
တခွက် မလေးရှား ရင်းဂစ် ၂၀ ကျော်တန် (S$ 8.30) ရိုးရိုး ကော်ဖီတွေနဲ့ မတူတဲ့ ကော်ဖီတမျိုး ဟာ သောက်သုံး မှီဝဲ ကြသူ တစုအကြား နာမည်ကြီး လာနေတယ်လို့ ပါ ပါတယ် ၊
“ ပုရိသတို့ ရဲ့ဘ၀ ကို ပြည့်ပြည့်၀၀ ခံစားနိုင်ပြီ ” .. လို့ လည်း ကြော်ငြာထားသေးတယ် ဆိုပါတယ် ၊
စမ်းသပ်ချက် တွေ့ ရှိ ချက်တွေအရ ...
အဆိုပါကော်ဖီ မှာ ပန်းသေပန်းညှိုး ရောဂါ ( မျက်စိနဲ့ မဖတ် ခြေမျက်စိ နဲ့ ဖတ်ပါဗျာ) ဝေဒနာရှင်တွေကို ကုသရာမှာပေးတဲ့ Sildenafil ဆိုတဲ့ ဆေးဝါး ပစ္စည်း တမျိုး (Viagra မှာလည်းတွေ့ ရှိရ) ပါဝင်နေတာတွေ့ ရ ပါတယ်တဲ့ ၊ သူတို့ ထုတ်လုပ်တဲ့ ပစ္စည်း ရောင်းအား ပိုတက် စေဘို့ ရည်ရွယ်ပြီး ဖြန့် ချီတဲ့ ကုမ္ပဏီ မှ အဆိုပါ ဆေး ကို ထပ်မံပြီး ဖြည့်စွက်ထည့် ထားတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
ကွာလာလမ်ပူမြို့ ရှိ ကုမ္ပဏီ ၀င်း ကို မလေးရှား ကျမ္မာရေးဌာန အရာရှိတွေ ၀င် ရောက် စီးနင်း ရာမှ ၄င်း လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ကိုဖော်ထုတ် သိရှိလာရတာ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ .. ယ္ခု ကော်ဖီဟာ ဆေးဘက်ဝင် အပင်တွေရဲ့ အဆီအနှစ်၊ ပျားရည် တို့ နဲ့ဖော်ထုတ်ထားတာ ဖြစ်ကြောင်း သာဖော်ပြထားပြီး အဆိုပါ ထိန်းချုပ်ကန့် သတ် ထားတဲ့ ဆေးဝါးပစ္စည်း ပါဝင် မူ့ကိုတော့ ဖော်ပြထား တာမရှိ ပါဘူးတဲ့ ။
ဆရာဝန် ညွှန်ကြားမူ့ မရှိဘဲ ၄င်း Sildenafil ကို သုံးစွဲ ရင် အသက်သေဆုံး သည် အထိ ဖြစ်တတ်လို့ ဆို ထားပါ တယ်၊ အထူးသဖြင့် သွေးတိုးရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ ရှိသူများ ကိုလက်စထရော မြင့်သူများ ရုတ်တရက် အသက်သေဆုံး သည့် သာဓက များ ရှိခဲ့ဘူးပြီးဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ် ခင်ဗျား ....
Posted by mks at 10:05 PM2comments: Links to this post
“ရုပ်ရှင်သွားဘို့ အလှပြင်ရာတွင် မှန်တင်ခုံ နဲ့ ကျမ မျက်နှာချင်းဆိုင် ကိုယ်ဟန်ကျော့ကျော့ xx --”
ဟို တုန်းက ရေဒီယို က မကြာမကြာ လာတဲ့ သီချင်း လေး ....
မှန်တင်ခုံ နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်တယ် .. ဘာလုပ်မလို့ လည်း .. အလှပြင်မလို့လေ ... ဘာဖြစ်လို့ လဲ ? လှချင်လို့ ပေါ့ ..
" Humans have always sought to enhance their appearance" ...
လှအောင်လုပ်ကြတယ် လှအောင်ပြင်ဆင်ကြတယ် .. မလှဘူးဆိုရင် ငိုချင်တယ် ..လှတယ်ပြောမှသဘောကျတယ် လေ..
သနပ်ခါးလိမ်းမယ် ပန်းပန်မယ် နူတ်ခမ်းနီဆိုး၊ မိတ်ကပ်လူး၊အရောင်သွေး ပုံစံအမျိုးမျိုး အ၀တ်အစားတွေဝတ်၊ လက်စွပ် လက်ကောက် ဆွဲကြိုး တွေဆင်မယ် ..ပြီးတော့... ပြီးတော့..ပြီးတော့
ပုရိသ တွေတောင် နားဆွဲ နားကွင်း နသန်သီး တွေနဲ ၊့ မျက်နှာ နဖူး လျှာတွေပေါ်မှာ ဘုတွေ ကွင်းတွေ ဂျို တွေ တပ်.. Tattoo ထိုး အမေ မွေးတုံးက အကောင်းပါလာတဲ့ လျှာ ကိုတောင် ၂ခွ ဖြစ်အောင်ခွဲပစ်သေး .. wow wow wow...
လှတာ လူတိုင်းကြိုက်တာပေါ့ ...ကျနော့ ချစ်ချစ်ကြီး ၊ ကျနော့ ညီမ တူမတွေ ကို ပြောလေ့ ရှိပါတယ် .. ယဉ်ယဉ်လေးပြင် လှလှပပ လေးနေ .. ဘိုသီဘတ်သီကြီး မနေ ပါနဲ့ကွာ ..
လှလှလေး ပြင်ဆင်၊သပ်သပ်ရပ်ရပ် လေးဝတ်စားထားတဲ့ အချိန် မှာ ကိုယ့်အနေထား က လန်းဆန်းနေပြီး စိတ်အနေထား လည်း ပိုကြည်လင်နေတတ် တာ သတိထားမိကြတယ် မလား .. ထားမိကြမှာပါဗျာ .. ဘေးကကြည့်ရတဲ့ သူတောင် မျက်စိ အေးတယ် ..
တိုးတက်လာတဲ့ ဆေးသိပ္ပံ ပညာတွေနဲ့ အတူ ရူပကာ သွင်ပြင် ကို ပိုကြည့်ကောင်း ပိုချောလာအောင် ခွဲစိတ် ပြုပြင် တဲ့ နည်းတွေဟာလည်း ဖွံ့ ဖြိုးလာ ခဲ့ပါသတဲ့...
Liposuction ဆိုတဲ့ နည်း နဲ့လူတွေ ရဲ့ ကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေ ရဲ့(၀မ်းဗိုက်၊ ပေါင် တင်ပါး၊ ကနေ လက်မောင်း ၊ လည်ပင်း အထိ) အရေပြား အောက်က အဆီတွေ ကို ပြီး ဖယ်ရှား (စုပ်) ထုတ် ပစ် နိူင် ပါသတဲ့။
အဆီတွေ များများထုတ် လေ အန္တရာယ် ဆိုးကျိုး ပိုကြုံ နိူင်လေ တဲ့ ...
ကောင်းမွန်စွာ လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့ အပြင်ဆေးခန်းဖွင့် ဆရာဝန်တွေ ကိုလည်း စင်္ကာပူကျမ္မာရေးဌာန ကLiposuction ဆောင်ရွက်ခွင့် ပြုပါ သတဲ့ .. ဒါပေမဲ့ တကြိမ် မှာ တစ်လီတာ ထက်ပိုပြီး အဆီတွေ မထုတ် ဘို့ ညွန်ကြားထား ဆို ရဲ့...
ကြော်ငြာ တွေဖတ် ပြီးတော့ .. ဖြစ်လာနိူင်တဲ့ အန္တရာယ် ဆိုးကျိုး တွေကို မလေ့လာ သိနားလည် ဟန် မရှိ ဘဲ လှပလာ ဘို့ အတွက် လူတွေ ခွဲစိတ်ခံ ကြသတဲ့ ...
ဒီဘက်ခေတ်မှာ လူတွေ ၀ လာကြတာ အတော် များများဘဲလေ ... အစားသောက် နဲ့ လျှော့ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပြီး ၀ိတ်လျှော့ရင် အလှတွက်သာမက ကျမ္မာရေး အတွက်တောင် ပိုကောင်းသေး တဲ့ ဗျ ..
.. အင်း ချစ်ချစ်ကြီး ရေ ..
လှသထက် လှမယ် ဆိုရင်
မောင့် အသွေးတွေ မောင့်အသားတွေ
မောင့် အသဲတွေ မောင့် နှလုံးတွေ
အသုံးပြုပါလေ ကြည်ဖြူပါတယ် လိုရာကို ယူစေ ...
(ကိုအောင်ခိုင် .. စာသား တည့်ပေးတာ ကျေးဇူး)
Posted by mks at 12:30 AM6comments: Links to this post
၅၉-၆၁ ၂၃လမ်း (အောက်)
၂၃ လမ်း အောက် ဘလောက်
မနက် ၄နာရီကျော် လောက် ဆိုရင် ကျနော် တို့နေတဲ့ အခန်း နှင့် (တကယ်တော့ ၁၀ နှစ် ကျော် တည်းခိုခဲ့ တာပါ) မလှမ်းမကမ်း က ကိုဇော်ထွန်း လ္ဘက် ရည် ဆိုင် တနေ့ တာလုပ်ငန်း Run ဘို့ စတင် ပြင်ဆင်ပါပြီ .. မီးမွှေး .. ရေနွေးကြို ..
“ဟေ့ကောင် ဇော်ဝမ်း ထ .. အောင်မာ .. တိုင် မှီပြီး ငိုက်တောင် နေသေး .. သောက်မဲ့ လူတွေ ရောက်နေပြီ”..
သူတို့ ကတော့ ဘေး ပတ်ဝန်းကျင် ကို ဂရု ပြု တာမရှိ .. သူတို့ဈာန် နဲ့သူတို့ ....
ဂွမ်း... ဂွမ်း ရေပီပါ ထဲ ဒန်ရေခွက် ပစ်ထဲ့တဲ့အသံ ရေနွေးကရား အဖုန်း ဖွင့် ပိတ် သံတွေ နဲ့ ... ...ကျနော်တို့ လည်း နိုး လာကြရ ပါပြီ .. ကြိုးစား ပြန် အိပ် ကြည့် ... ကြည့် ...ကြည့်
ဂွပ်... ဂွပ်.. ဂွပ် ... အဲဒါ .. မိညို ..
လမ်းထိပ် ကို အုန်းနို့ ခေါက်ဆွဲ ဆိုင် ဖွင့်ဘို့သွားရင် သူ့ ခုံဘိနပ် အမြဲ ရှပ်တိုက် စီးတာ .. အခန်းရှေ့ က ၃ ခေါက် ထက် မနည်း သူ့ ဆိုင် နဲ့အိမ် ကို ခေါက်တုန့်ခေါက်ပြန် Shuttle ကူး ပါတယ် ၊တိတ်ဆိတ်နေ သေးတဲ့ မနက်ခင်း စောစော အချိန်လေးမှာ တိုက်အမြင့်တွေ ကြားထဲက ဒီအသံတွေဟာ ပဲ့တင် (Echo) လိုက်နေတတ်ပါတယ်။
မြေညီထပ် က ဒီအခန်းလေး ကိုလည်း အရှေ့က ဘာဂျာတံခါး လေး ဘဲ စေ့ထားပြီး အိပ်ကြတာမို့အသံတွေဟာ ကျနော်တို့ အိပ်တဲ့ အထပ်ခိုးလေး အပေါ်အလုံးအရင်း လိုက် စုပြုံတက် လာကြပါတယ် .. မိညို သူ့ဆိုင်ရောက် သွားပြီးရင် ရာဘာ ဘိနပ်အမြီး ပိုင်း နဲ့သူ့ဖနောင့် တဖျတ်ဖျတ် ရိုတ် ပြီး စီးတတ် တဲ့ မိညို ရဲ့ အကို “ခွေးလေး” တွန်း တဲ့ ဟင်းရည်အိုး တွန်းလှည်း တ ဒုတ် ဒုတ် နဲ့ ဖြတ်သွားပြီး ရင်တော့ တခါ ညိမ် သက်သွားပြန် ပါရော၊ အင်း တချက် ပြန် မှေး လိုက်ပါ ဦး မယ် လေ .... အင်း ..
ပဲ ဟဲ ဟဲ ပြုတ် ... လာပါ ပြီ သူ ... ၀ယ်နေ ကျ ဖောက်သည် တွေ ဆို တော့ ..ဒီအခန်း ရှေ့မှာ ဘဲ ရှေ့တိုး နောက်ငင် ခေါက် တုန့် ခေါက် ပြန် ...
၀ယ် တဲ့ သူ ထွက်မလာ မခြင်း ပဲ ဟဲဟဲ ပြို့နေတော့ တာဘဲ ...
“ဟေ့ရောင် ကျော်ဆွေ ထ တော့ကွာ ပဲပြုတ် ၀ယ် ဦး မှာ လား” ...မန်နေဂျာကြီး ကို နှိုးလိုက်သည် .. @ X %.. e.. r ....
“ဒီနေ့ မယူတော့ဘူး တဲ့ ဗျို့ ” ...
တဆက်တည်း မှာ ဘဲ ..
တွီ .. ဟီ .. ဟီ .. ဟီ အပေါ်ထပ် က ရေတင်ပြီ ..
ဒီ အခန်း ၃ ခန်း (၃ ထပ်)လုံး အတွက် ရေ မော်တာ က တလုံးထဲ ရှိပြီး ရေ မော်တာ ကို အိမ်ထဲ မှာထားတော့ သိပ်ဆူပါတယ် .. ကဲ ကဲ ထ တော့ ရေတင် တုံး ရေချိုးထား...
ဂ လင်း ဂ လောင် ဂ လောင်... “မယ်စလီ အမှိုက် သွန် လိုက် အုံး ဗျို့ကျနော် ရေချိုး နေလို့...”
ရုံးခွဲ ရဲ့အထွေထွေ လုပ်သား ကြီးကို လှမ်း သတိပေး ရပါသေး ..
ဒညင်းသီးပြုတ် ( ၁၀၀ ဘိုး ၃ကင် .. တကင် အဆစ်တောင်း လို့လူပါ ခေါ်ထားလိုက် ပါလား တဲ့) ဟီး .. ကျုပ်တို့တောင် ကပ် နေနေ ရတာ ကို ...
ကျွဲ ခေါင်းသီးပြုတ် ( မာကြာပါလာ ပါနီ .. လို့ကုလားလိုထည့် အော်သေး)
မောင် ခိုင်..မြဲ တံမျက်စည်း ( ဖုန်း ဖုန်း ..တံမျက်စည်း ကို လမ်း ပေါ် ရိုတ် ပြ တဲ့အသံ)
ကြက်ဥ ခေါက်မုန့် 
အကုန် ရေးရင်တော့ ... ဆန့် တော့မှာ ဟုတ်ဘူး ...
တဖက် ၅ အိမ်စီ လောက်ကြားရအောင် စေတနာ နဲ့ ဖွင့်ပြတတ်တဲ့ တအိမ်က ညပိုင်း ဘီဘီစီ မြန်မာ ပိုင်း အစီစဉ် ပြီး ရင် တော့ လမ်းလေးထဲ မှာ ညိမ်သက်ခြင်း နဲ့ ပြန်ကြုံ ရ ပါပြီ ...
မုန့် ...ဖက်..ထုပ် .... နဲ့တကယ် ပွဲသိမ်း ပါပြီ ၊ သန်းခေါင် လောက်မှာ ကြွက် ပစ်တဲ့ အဖွဲ့ မလာရင်ပေါ့..
(ကြွက်ပစ်တဲ့ အဖွဲ့ နဲ့အင်တာဗျူး လုပ်ထားတာ ကြုံ ရင် ရေး ပါဦးမယ်)
ကျနော် တွေး မိတာ က ... ဒီအသံ တွေ နဲ့ နေ့ စဉ် ကြုံဆုံ နေကြ သူတွေ ရဲ့ အကြားအာရုံ ကို မသိမသာ များ ထိခိုက် နေမှာလား လို့ ပါ ။
Reader's Digest မှာ ဖတ်လိုက်ရတဲ့ .. စင်ကာပူ၊ ဘန်ကောက်၊ ကွာလာလမ်ပူ တို့မှာ စမ်းသပ် တွေ့ရှိချက် ဆိုတာတွေ အရ ရထားဘူတာ ရှော့ပင်းမော စားသောက်ဆိုင် တွေမှာ ပျှမ်းမျှ အသံနှူန်း 70 decibles ရဲ့ အထက်မှာရှိ ပါသတဲ့ ... တရုတ် စားသောက်ဆိုင် တခုဟာ သူရဲ့ အဆူညံ ဆုံးအချိန် မှာ 109.5 decibles ရှိ ဆိုဘဲ ...
အဲဒီ Report မှာ ဖော်ပြထားသေးတာက ဒီ ဆူညံ နှူံး ထဲမှာ ဆက်တိုက် နေသွားမယ် ဆိုရင် ကျနော်တို့ ရဲ့ နား အကြား အာရုံ ပျက်စီးမယ်တဲ့ ...နားတွေ လေးလာမယ်ပေါ့ .. ဟုတ် သော်ရှိ မဟုတ်သော် ရှိ ပေါ့လေ ၊
ဖတ်မိတဲ့ စာတပိုဒ် ထဲက ရေးထားတာကို ဒစ်ရှင်နရီ လှန်ပြီး ကိုယ်နားလည် သလို တိုက်ရိုတ် မြန်မာ မူ့ပြုလိုက်ရင် ..မူလ ဆိုလိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် မရောက် မှာစိုးလို့ အဲဒီ စာပိုဒ် ကို အရင်းတိုင်း ဘဲ ကူးတင် လိုက်ပါရစေ ..ဖတ်မိပြီး သူတွေ လည်းရှိမှာ ပါ။
ဆူညံတဲ့ အသံဗလံတွေ နဲ့ နွယ်ပြီး ဖြစ်လာ တတ်တာတွေ က....
degradation of the immune system, and
impairment of learning.
Noise is also associated with an increase in aggression andadecrease in cooperation. ဟူ၏။
ကျနော် အဲဒီ လမ်းလေး ထဲမှာ နေတုံးက နေ့ စဉ် ကြားခဲ့တဲ့ အသံ တွေဟာ နောက်ပိုင်း မှာ တော့ နားယဉ် သွားပြီး အေးဆေး ဖြစ်သွား ခဲ့ ပါတယ် ...
ဒါမှ မဟုတ်ဘဲ ...
ကျနော် တကယ် ကြီးနားလေး သွားတာလားတော့ မသိဘူး ဗျ
Posted by mks at 9:02 PM4comments: Links to this post
ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း အောင်ပန်းမြို့ အနောက်ဖက် တောင်တန်း ထဲမှ တောင်တိုတောင် ပေါ်တွင် တောင်တို မင်း တည်ထား သော စေတီစု အောင်ချမ်းသာ ဆရာတော် ဦးဆောင် ၍ ပြန်လည် မွမ်းမံ ထားပြီး ဖူးတွေ့ ရ ပုံ
Posted by mks at 9:04 PM2comments: Links to this post
ကျောင်း ပြီး တော့ ပဲခူးမှာ သနပ်ဖက် ပွဲရုံ ဖွင့်ထာတဲ့ အကို ၀မ်းကွဲ တယောက် ဆီ သွားနေပါတယ် .. ပွဲရုံ အလုပ် လုပ်ကူ .. သုံးဘို့ စွဲ ဘို့ လေး လည်း ရတာပေါ့ ..
မှတ်မိသလောက် ပြောရရင် ၀ါးခြင်း ၀ါးကပ် တွေနဲ့(သနပ်ဖက် ပို လို့ ခေါ်ပါတယ်)ထည့်ထား တဲ့ သနပ်ဖက် တွေကို လက်လီ ပြန်ရောင်းသူတွေ ၊ ဆေးလိပ် ခုံငယ် တွေ က “ပို” လိုက် လာဝယ်ကြ ပါတယ်။
နာမည်ကြီး ဆေးလိပ် ခုံတွေ ဆီ က ဆေးရွက်ကြီးဆေးစပ် တွေ ကိုဘဲ ယူပြီး သနပ်ဖက် ကိုတော့ ကိုယ့်ဖာသာ ၀ယ် .. ဆေးလိပ်သမ တွေ ငှားပြီး လိပ် ၊ ပြီးတော့မှ ခုံကြီး တွေ ရဲ့ တံဆိပ်ကပ် ပြန်သွင်း တဲ့ ဆေးလိပ် ခုံငယ် တွေ ကတော့ ကျနော် တို့ ပွဲရုံ တွေရဲ့ အဓိက ဖေါက်သည် တွေ ပါဘဲ။
သနပ်ဖက် ကားတစီး ချပြီ ဆိုရင် နေ့ တပိုင်း လောက် နဲ့အရောင်းပြတ် သွား တတ်လေ့ရှိ ပါတယ် .. ဒါပေမဲ့ အံဆွဲ ဖွင့်ကြည့်ရင် ဒီကား က ကုန်အတွက် ရောင်း လို့ ရတဲ့ ပိုက်ဆံ ကတော့ တပြား မှ မရှိပါဘူး ..
အဟောင်းပေး အသစ်ယူ တွေ ကပေးတာဘဲရှိမယ်။
ညနေ ကျရင် တော့ စက်ဘီးတစီး လွယ်အိပ်တလုံး နဲ့ စာရင်းစာအုပ် ကိုင်ပြီး ( အကြွေးတောင်းထွက်) ငွေပြန်လိုက် စု တာပေါ့ ..
အလွယ်တကူ ပြန် ပေးတဲ့ သူတွေ ရှိသလို အီးအား ဆွဲ သူတွေလည်း အများကြီး ကြုံ ရတာဘဲ.. အပြည့် ပြန်ရတာတော့ ရှားပါတယ် .. ကိုယ် တိုင် လည်းသွား၊ ပွဲရုံ ပင်တိုင် သုံး ဆိုက်ကား ဆရာကိုတင်ငွေ ကို လည်း သွားခိုင်း နောက်တော့ မရတဲ့ အဆုံး အကြွေးဆုံး စာရင်း ထည့် .. ကြွေးယူ ထားသူ ကလည်း ဒီဘက် လှည့်မလာတော့ဘဲ နောက်ထပ် ပွဲရုံ တခု ဆီ ကကုန်တွေ ပြန်လှည့်ယူ.. အတွေ့ ကြုံတခုတော့ ရခဲ့ပါ တယ်။
ပဲခူး မှာ နေခဲ့ တုံး အမြတ် တခုထွက် ခဲ့တာကတော့ ဆိုက်ကား နင်းတတ် သွားတယ် (အလုပ်မရှိရင် ဆိုက်ကားနင်းစားလို့ရသွားပြီ) ၊ ညနေ ကိုတင်ငွေ ဘုံဆိုင် သွားရင် ကျနော်က နင်း သူကစီးလေ ... စစဦး တော့ ဟိုထိုး ဒီရမ်း ဘဲ .. “မင်း က လက် ကိုင် ကြီး အသေ ဆုတ် ထားတာ ကိုး ... လက် ကိုင်ကို ဖွဖွ ဘဲ ထိန်း ခြေထောက် ကိုဖိပြီး နင်း ကွ” ၂ရက် လောက် နေပြီးတော့ အိုကေ သွားပါတယ် ၊ အရင်တုံးက စက်ဘီးစီးတတ် ရင် ဆိုက်ကား နင်းတတ် မယ်ထင် ထားတာ .. တခြားစီဘဲ ..
Posted by mks at 3:23 PM2comments: Links to this post
နှစ်သစ် နေ့ သစ်ရောက် လာပြီ
တနေထွက် ပြီး တနေ၀င် တာ ဆို ပေမဲ့ သတ်မှတ် ချက် တွေ စံတွေ ကိုတော့ ကန့် လန့် ကြီး သွားမလုပ် ဖို့ တော့ လို မှာပေါ့ နော်..
အလုပ်ထဲ က တယောက် ကမေးတယ်၊ ၂၀၀၉ မှာ မင်း ပလန် တွေ တားဂက် ရောက် လား တဲ့ .. အဲဒီ လို ရှေ့ အတွက် Plan တွေ ချ ပြီး အစီအစဉ် ဆွဲ လေ့မရှိ တဲ့ ကျနော့ အတွက် နဲနဲ ဖြေရ ကျပ်ကျပ် ..
အသက် ပိုကြီး လာ ရုပ်ရည် တွေ ပြောင်းလည်း လာ
အသက် ဆိုတာ Justafigure တဲ့ figure တခါ ပြောင်းသွား ပြန် ပြီပေါ့ ..
One-way ticket ကိုယ်စီ ကိုယ်စီ နဲ့ 
နောက်ဆုံးတော့ ဒီ လူ့ လောကကြီး ကနေ တောင် အပြီး သွားကြ ရဦး မှာဘဲ ..
စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ ကျမ္မာခြင်း များနှင့် ပြည့်စုံ ပါစေ ... ပြည့်စုံရပါ လို၏ ။
Posted by mks at 1:59 PM 1 comment: Links to this post